DEEP WEB သို့မဟုတ် မြေအောက်ကွန်ယက် | MP4 YoU world ' : ''; var month = [1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12]; var month2 = ["Jan","Feb","Mar","Apr","May","Jun","Jul","Aug","Sep","Oct","Nov","Dec"]; var day = postdate.split("-").substring(0,2); var m = postdate.split("-"); var y = postdate.split("-"); for(var u2=0;u2
Home general knowledge true story DEEP WEB သို့မဟုတ် မြေအောက်ကွန်ယက်
MP4 YoU 1:08 PM general knowledge , true story Edit
အမှန်တကယ် ဖြစ်ရပ်တွေပါ စိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းပါတယ်...
မြေအောက်ကွန်ယက် ဆိုတာ သမားရိုးကျ Google လို ရှာဖွေရေး စနစ်နဲ့ ရှာမတွေ့နိုင်တဲ့ အခြား တစ်ဖက်မှာ ရှိတယ်။ ဒီကွန်ယက်ထဲကို ဝင်ရောက်ဖို့ဆိုရင် ခင်ဗျားကို အမည်မသိ လူတစ်ယောက် အဖြစ် ဖျောက်ကွယ် ထားပေးနိုင်မယ့် ဆော့ဖ်ဝဲ တစ်ချို့ လိုကောင်း လိုအပ်မယ်။ ၎င်း ကွန်ယက် ထဲမှာ ခင်ဗျား အနေနဲ့ စိတ်တောင် မကူးဝံ့သော ရက်စက်မှုတွေ၊ အော်ဂလီဆန်မှုတွေ နဲ့ မြေအောက် လှုပ်ရှားမှုတွေ ရှိတယ်။
အမှောင် ဝီကီပိဒိယ ဆိုရင်.. ဒီကမ္ဘာ တစ်ဖက်ရဲ့ လမ်းပြမြေပုံ သဖွယ် အလုပ်လုပ်တယ်။ အမှောင် ဝီကီပိဒိယကို ခင်ဗျား ဝင်ရောက်နိုင် ခဲ့ပြီ ဆိုတာနဲ့ ဒီ ကွန်ယက်ကြီးတစ်ခုလုံးမှာ ကြည့်ရှု လေ့လာ လို့ ရတဲ့ လင့်ခ် တွေကို တွေ့မြင်ရမှ ဖြစ်တယ်။ ကျုပ် တစ်သက်မှာ တစ်ခါပဲ မြေအောက် ကွန်ယက် မှာ ကျင်လည်ခဲ့ဖူး သေးတယ်။
ဒီကို ရောက်ဖို့ ဆိုတာ တကယ် ခက်တယ်။ အီးမေးလ်ထဲက Spam ပုံးထဲမှာ ရောက်နေတဲ့ ဖိုင် တစ်ခု ကို ကျုပ် သတိပြုမိတဲ့ နေ့က စ တာပဲ။ ညွှန်ကြားချက်မပါ လမ်းညွှန်ချက်မပါတဲ့ ဆော့ဖ်ဝဲ ကို ကျုပ် ကွန်ပျူတာထဲ တစ်မျိုးပြီး တစ်မျိုး စမ်းသပ်လို့ ထည့်ကြည့် နေမိတယ်။ ကိုယ်တိုင်ကလဲ နည်းပညာ သမား မဟုတ်တာ ပါမယ် ထင်ပါရဲ့။ ဒီလိုနေရင်း နာရီ အတန်ကြာတဲ့ အခါမှာတော့... ကျုပ် ကွန်ပျူတာ ထဲကို ကံအားလျော်စွာ ဆော့ဖ်ဝဲ သွင်းလို့ အဆင်ပြေသွားခဲ့တယ်။
ဒီလိုနဲ့ ဝင်ရောက်သွားတဲ့အခါ ကျုပ် ပထမဆုံး တွေ့တဲ့ ဟာက အမှောင် ဝီကီပိဒိယ အထဲကို ဝင်တဲ့ ဖတ်လို့ မဖြစ်နိုင်တဲ့ လင့်ခ် အရှည်ကြီး တစ်ခုပဲ ဖြစ်တယ်။
ခင်ဗျားတို့ အနေနဲ့ ဒီကိစ္စတွေကို ကြားဖူးနေကြ ဖြစ်လိမ့်မယ်။ ကိုယ်နှိပ်တဲ့ လင့်ခ်တွေကို ဂရုစိုက်ပါ ဆိုတဲ့ သတိပေးသံ တွေ အပြင် လောက ကွန်ယက်တွေ မှာ တွေ့ မြင်ဖူး ကြလိမ့်မယ်။ ရာနှုန်းပြည့် မှန်တယ်။ ဒီလင့်ခ်တွေရဲ့ သယ်ဆောင်ရာ ဒေသမှာ ကျုပ် ရောက်နေ ခဲ့တဲ့အခါ မြင်မကောင်း ရှုမကောင်း လောက်အောင် အနိဋ္ဌာရုံ တွေ ချည့် အပြည့် မြင်တွေ့နေရတယ်။ ဒီလောက်ရှောင်နေ တိမ်းနေတဲ့ ကြားကမှ တချို့ အကြောင်းအရာတွေ ဆောင်းပါး လေးတွေကို မျက်စိ က ရောက်ဖြစ် အောင် ရောက်လိုက်သေးတယ်။
ဘယ်သူ တစ်ဦးတစ်ယောက်မှ မကြည့်သင့်တဲ့ အရာတွေ။ ရွံဖို့ ကောင်း ပြီးတော့ မိစ္ဆာနတ်ဆိုးတို့နဲ့ အလားသဏ္ဍာန် တူတယ်။ ကျုပ် ဒီ မြေအောက် ကွန်ယက်မှာ ဖတ်နေတာ အစပိုင်းပဲ ရှိသေးတယ်။ ဆယ်မိနစ်လောက်လဲ ကြာရော.. အိမ်ရှေ့မှာ FBI က ရဲတွေ ရောက် နေမှာ အလွန်အမင်း ကြောက် လန့် မိနေပြီ။ ကျုပ်ရဲ့ စပ်စုတဲ့ ပြစ်မှု အတွက်ပေါ့။
ကြောင်လှပါလားလို့ ခင်ဗျားတို့ ထင်ကောင်းထင်မယ်မှန်း ကျုပ် သိ တယ်။ ဒါပေမယ့် မြေအောက် ကွန်ယက်ရဲ့ သဘာဝ ကိုက မူးယစ် ဆေးသုံးနေတဲ့ လူတစ်ယောက်နဲ့ အလားသဏ္ဍာန် တူနေတယ်။ အချိန် တိုင်း ခင်ဗျား တုန်လှုပ်ခြောက်ခြားနေပြီးတော့ ငါ့ လုပ်ရပ်က မှန်ရဲ့လား... တရားရော ဝင်ရဲ့လား ဆိုတဲ့ ဒွိဟအတွေး ခင်ဗျားဆီမှာ ဖြစ်ပေါ်လို့ နေတယ်။
"ငရဲ" တဲ့။ သူငယ်ချင်းအချို့ကို ကျုပ်အဖြစ်အပျက် ပြောပြတဲ့ အခါ သူတို့က အဲ့သလို သုံးသပ် ကြတယ်။ ဘယ်လိုပဲ ဖြစ်ပါစေ စစသုံးချင်း မှာတော့ ရဲတွေ အိမ်ရှေ့ရောက်နေပါပြီ ဆိုတဲ့ ခြောက်ခြား စိတ်ကို ဘယ်လိုမှ ဖျောက်ပစ်လို့ မရဘူး။
ဒီလိုနဲ့ ရက် အနည်းငယ် ကြာတဲ့ အခါမှာ ကျုပ် နည်းနည်း စိတ်ဖိစီး တာ လျော့လာတယ်။ ကိုယ့်ကို ကိုယ် လဲ ယုံကြည်ချက်ရှိလာတယ်။ မြေအောက် ဝီကီပိဒိယ ကနေ စွန့်စားပြီး ထွက်ခွာလို့ ကွန်ယက် အနှံ့ လျှောက်ကြည့် ချင်လာတယ်။ ဒီလိုနဲ့ လင့်ခ်လေး တွေ ဟိုတစ်စ ဒီတစ်စ သတိလေးနဲ့ နှိပ် လို့ လျှောက်ကြည့်မိတယ်။
ဓာတ်ခွဲ စမ်းသပ်ဖို့ လူငှား ကြော်ငြာ တွေ၊ ကြေးစားလူသတ်သမား ငှားရမ်း လိုသူ တွေရဲ့ ကြော်ငြာ တွေ၊ ငွေမဲဈေးကွက်တွေ... ရှေးဟောင်း ပစ္စည်း လဲလှယ် ရောင်းဝယ် သူတွေ စသဖြင့် ခင်ဗျားတို့ ကျုပ်တို့ နေ့စဉ် တွေ့နေုကျ သတင်းအချက် အလက်တွေ မဟုတ်တဲ့ ခပ်ကြောင်ကြောင် ဝက်ဘ်ဆိုက် တွေ တစ်ခု ပြီးတစ်ခု ကျလာခဲ့တယ်။
ယုံရခက်ခက် တွေ။ ဘာနဲ့ အလားသဏ္ဍာန် တူသလဲ ဆိုတော့ ပုံမှန်လိုင်းပေါ်မှာ မြင်တွေ့နေကြ ဆာဗေး လုပ်ခိုင်းနေတဲ့ ဝက်ဘ် ဆိုက် တွေလိုပဲ။ ကွာခြားချက်က ဒီ မြေအောက်ကွန်ယက် မှာ ဆာဗေး မရှိဘူး။
ကျုပ် မြေအောက်ကွန်ယက်မှာ ကျင်လည်ခဲ့တဲ့ တလျှောက် ညစ်ညမ်း ဝက်ဘ်ဆိုက်တွေကို ရှောင် တယ်။ အလွန် သေးသိမ်တဲ့ စိတ်ဓာတ်နဲ့ ကလေးမုဒိန်း အခွေတွေ ရောင်းဝယ် ဖောက်ကားနေတဲ့ နေရာတွေပဲ။ ဒါ့ကြောင့် ကလေးညစ်ညမ်းအခွေတွေ လိုင်းပေါ်မှာ မရှိလဲ ဒီကိစ္စ စိတ်ဝင်စားသူတွေ အနေနဲ့ မြေအောက်ကွန်ယက်မှာ အရင်ကထဲက လှုပ်ရှား ရှာဖွေနေမှန်း တွေးမိလာခဲ့တယ်။
ပွင့်ပွင့်လင်းလင်း ဝန်ခံရရင်တော့ တစ်ခွေလားပဲ.. ဖွင့်ကြည့် မိတယ်။ စပ်စုမိတာပါ။ မအန်မိရုံ တမယ်ပဲ လူက။ ဒါနဲ့ မြန်မြန် ပြန်ထွက်ခဲ့ ရတယ်။ (မှတ်ချက်။ လုံးဝ မစမ်းပါနှင့်။)
ဒီလို လျှောက်ကြည့်ရင်း ထူးခြားတဲ့ ဖိုရမ်လေး တစ်ခုကို သတိပြု မိတယ်။ ဖိုရမ်နာမည်က "အိမ်တွင်း ပုန်း မိသားစုများ" တဲ့။ ခြောက်ခြားစရာလဲ ကောင်းသလို စူးစမ်းလိုစိတ်လဲ ရှိတာကြောင့် ကျုပ် ဒီ ဖိုရမ် အထဲကို ဝင်လာလိုက်တယ်။
ဝင်ဝင်ချင်း နှုတ်ခွန်းဆက်စာမှာ ရေးထားပုံအရ.. ဒီဖိုရမ်ဟာ တကယ် တော့ အသင်းအဖွဲ့ တစ်ခု ဖြစ် တယ်။ ကမ္ဘာအနှံ့အပြားက ထူးဆန်း တဲ့ မိသားစုတွေ ဝင်ရောက် ဆွေးနွေးလေ့ရှိတဲ့ ဖိုရမ် တစ်ခု ဖြစ် တယ်။ ဒါပေမယ့် ထူးဆန်းတယ် ဆိုတာက သူတို့ဟာ အပြင်လုံးဝ မထွက်သူ တို့၊ ပတ်ဝန်းကျင်နဲ့ အဆက်အသွယ် တမင် ဖြတ်ထားသူတို့ အဆင့် သာ ဖြစ်ပြီး ခင်ဗျားတို့ လူသတ်ကားတွေထဲမှာ မြင်နေ သလိုမျိုး မိသားစု မဟုတ်ဘူး။
သုံးယောက် တစ်ဖွဲ့ လေးယောက် တစ်ဖွဲ့လို မိသားစုငယ် ကနေ ခြောက်ယောက် ခုနှစ်ယောက်အထိ ကြီးမားတဲ့ မိသားစုအထိ အဖွဲ့လိုက် ဒီထဲမှာ သတင်းတွေ ဖလှယ် နေကြတယ်။ သူတို့ ကိုယ်ပိုင် အသိုင်းအဝိုင်းနဲ့ ဆက်စပ်တဲ့ ပုံလေးတွေ တင်ထားတယ်။
သူတို့ဟာ အိမ်ထဲမှာ မနေဘူး။ အိမ်ကိုစွန့်လို့ ဂိုထောင် ထဲမှာ ဖြစ်ပါ စေ၊ မြေအောက်ခန်းထဲမှာ ဖြစ်ပါစေ နေလေ့ရှိ ကြပြီးတော့ ရိက္ခာ ထွက်ဝယ်သူနဲ့ လယ်ယာ စိုက်ပျိုးသူတို့မှ အပ ကျန်လူများ၊ ကလေး သူငယ်များဟာ ၂၄ နာရီလုံး၊ တစ်ပတ်လုံး၊ တစ်လ လုံး၊ တစ်နှစ်လုံး၊ တစ်သက်လုံးအထိ ဒီ မြေအောက်ခန်း/ ဂိုထောင် ထဲမှာ နေသွားမယ့် လူတွေလို့ ယူဆ ရတာပဲ။
ဒီလိုလျှောက်ကြည့်နေတုန်း လူတစ်ယောက်ကို ကျုပ်သတိပြုမိတယ်။ ဒီဖိုရမ်ရဲ့ နာမည်ကြီး တစ်ယောက် ယောက် ဖြစ်မယ် ထင်တယ်။ ခေါင်းစဉ်တိုင်းရဲ့ အောက်မှာ သူဝင်ရောက် ဆွေးနွေး ထားတာတွေ ရှိတယ်။
ဖိုရမ်ရဲ့ ဟိုးအသေးငယ်ဆုံး အစိတ်အပိုင်းက လူမမြင်မိလောက်တဲ့ ဆွေးနွေးမှုမှာတောင် ဒီလူ့ရဲ့ ပြောဆို ဆက်သွယ်မှုကို အနည်းဆုံး တစ်ခွန်းတစ်လေ တွေ့နိုင်တယ်။ ဒါနဲ့ ဘာတွေများ ပြောကြသလဲ ဆိုတာ သိချင်တော့ နောက်ထပ်ပြပါ ဆိုတဲ့ ခလုပ်ကို နှိပ်လိုက်တဲ့ အခါ မန်ဘာဝင်မှ ရမယ်ဆိုတဲ့ စာ ပေါ်လာတယ်။
ကျုပ် သူတို့ အသေးစိတ် ဆွေးနွေး ပြောဆိုတာလေးတွေကို တကယ် သိချင် သလား လို့ ကိုယ့်ကိုယ် ကို မေးတယ်။ ဒီအခါမှာ သေချာတယ်။ ကျုပ်တကယ် လိုလိုလားလား နဲ့ကို သိချင်နေခဲ့ မိတယ်။ ဒီတော့ မန်ဘာ ဝင်မယ် ပေါ့။ အရင်ဆုံး ကိုယ့်ကို ဖျောက်ပေးထားတဲ့ ဆော့ဖ်ဝဲ က ပုံမှန် အလုပ်လုပ် နေသလား စစ်လိုက်တယ်။ အိုကေပြီ ဆိုတော့ ကျုပ် မန်ဘာ ဝင်ဖို့ မန်ဘာ ပရဝုဏ်ထဲကို ဝင်တဲ့ လင့်ခ် ကို နှိပ်လိုက်တယ်။
အချက်အလက် ဖြည့်ပြီးတဲ့ အခါမှာ စာတစ်ကြောင်းကျလာတယ်။ "မန်ဘာ အဟောင်း တစ်ယောက်နဲ့ စကားစမြည်ပြောဆိုရန်" တဲ့။ နည်းနည်းတော့ ထူးဆန်းသလို ဖြစ်သွားခဲ့ပေမယ့် အသိလဲ တစ်ယောက် မှ မရှိတော့ စောစောက နာမည်ကြီး ပုဂ္ဂိုလ်ဆီကို စာပို့ဖို့ ဆုံးဖြတ်လိုက်တယ်။ စာက -
"မင်္ဂလာပါခင်ဗျာ။ ကျုပ် အခုလို ခင်ဗျားနဲ့ မခင်သေးခင် ရုတ်တရက် စာပို့ အကူအညီတောင်းမိတဲ့ အတွက် ဦးစွာ တောင်းပန်လိုပါတယ်။ အရင်ဆုံး ကျုပ်ကိုယ်ကျုပ် မိတ်ဆက် ပါရစေ။ ကျုပ်နာမည် ကတော့ xxxx ဖြစ်ပြီး xxxx တက္ကသိုလ်မှာ စာတမ်းတင်ဖို့ လုပ်နေတဲ့ ကျောင်းသား တစ်ယောက် ဖြစ်ပါတယ်။ အခု တင်မယ့် စာတမ်းနဲ့ ပတ်သက်ပြီတော့ ခင်ဗျားတို့ ဖိုရမ်လေးကို သွားရောက် လေ့လာ ဖို့ မိတ်ဆွေ တစ်ယောက်က လမ်းညွှန်တဲ့ အတွက်ကြောင့် ရောက်လာခဲ့ခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ ခု မန်ဘာ ဝင်ဖို့ အခက်အခဲ ရှိနေတဲ့ အတွက် ကူညီဖြေရှင်းပေးပါလို့ အကူအညီ တောင်းအပ် ပါတယ် ခင်ဗျား။ တကယ်လို့ မန်ဘာဝင်ပြီး သွားခဲ့ရင်လဲ ဖိုရမ်ထဲမှာ ကျုပ်အနေနဲ့ သိလိုတာလေးတွေ မေးမြန်း လိုပါ တယ် ဆိုတာကို တစ်ဆက်ထဲ ခွင့်တောင်းလိုက်ရပါတယ်။ ကျေးဇူးတင် ပါတယ်။ ကောင်းသော နေ့ ဖြစ်ပါစေ မိတ်ဆွေ။"
ဟုတ်ပါတယ်။ ခင်ဗျားတို့ မြင်သလိုပါပဲ။ ကျုပ် အနည်းငယ် လိမ်လည်မိ လိုက်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့်လဲ အဲဒီအချိန်တုန်းက ကျုပ် အတွေးမှာ ယုတ္တိရှိမယ် ထင်စေချင်တာလားမသိဘူး။ အဲဒီလိုစိတ် ဖြစ်လာတဲ့ အတွက်ကြောင့် ရေးသားမိခဲ့ခြင်း ဖြစ်တယ်။ ဒီလိုနဲ့ပဲ ဆွေးနွေးမှုတိုင်းမှာ တက်တက်ကြွကြွ ပါဝင် နေကျ ပုဂ္ဂိုလ်ဟာ ကျုပ်စာကို ထူးဆန်းစွာ လစ်လျူရှုနေ ခဲ့တယ်။ စာလုံးဝ မပြန်။ တစ်ရက်၊ နှစ်ရက် ကနေ စောင့်ရင်း စောင့်ရင်းနဲ့ နှစ်ပတ်လောက်ကြာတဲ့ အခါ ကျုပ်တောင် မေ့တေ့တေ့ ဖြစ်လာတယ်။
ဒီလိုနဲ့ တစ်လ မပြည့် တပြည့် အချိန် ညတစ်ညမှာတော့ ကျုပ် ပုံမှန်အတိုင်း မြေအောက်ကွန်ယက် ထဲကို ဝင်လို့ ဖိုရမ် ဝက်ဘ်ဆိုက်ကို ရိုက်ထည့် လိုက်တဲ့အခါ...
မရှိတော့...။ ဖိုရမ် တစ်ခုလုံး အစရှာမရအောင် ပျောက်ဆုံးသွားပြီ။ ကျုပ်များ ဝက်ဘ်ဆိုက် လင့်ခ် မှားရေးမိလို့လား။ မဟုတ်သေးပါဘူး။ ကျုပ် ရေးတာမှန်တယ်။ ဒါဆို ဘယ်ရောက်သွားရတာလဲ။
ကျုပ် ပို့မိတဲ့ စာနဲ့ များ ဆိုင်လေမလား။ ဒါမှမဟုတ် ဒီပုဂ္ဂိုလ်က သွားများ တိုင်လိုက် လို့ ဖိုရမ် ပိုင်ရှင် ကြောက်လန့်ပြီးတော့ ဖျက်လိုက်တာများလား။
ကျုပ် တွေ့မိသလောက်တော့ တရားမဝင်တာ တစ်ခုမှတော့ မရှိပါဘူး။ ဘာ့ကြောင့်များခုလို ထူးဆန်း တဲ့ အပြုအမူနဲ့ တုံ့ပြန်လိုက်ရတာလဲ။ ပြီးတော့ ကျုပ်လိုမျိုး အခြား တစ်စုံတစ်ယောက်ကရော.. သူတို့ကို ကျုပ်ရေးတဲ့စာမျိုး ယခင်က မရေးကြဘူး တဲ့လား။ မဖြစ်နိုင်တာ။
ကျုပ် အံ့သြစိတ်နဲ့ မကျေနပ်စိတ်နဲ့ ရောယှက်လို့ မြေအောက်ကွန်ယက် အနှံ့ အသေးစိတ်ကို လိုက်လံ ရှာဖွေနေမိတယ်။ ဒီလိုမျိုး နေ့ချင်းညချင်း အသင်းအဖွဲ့ကြီး တစ်ခုလုံးကို ဖျောက်ပစ်ဖို့ဆိုတာ မဖြစ်နိုင် ဘူးလေ။ သူတို့ နာမည်ပြောင်းတာ ဒါမှမဟုတ် အခြားတစ်နေရာရာမှာ လှို့ဝှက်စွာ ကျက်စား နေတာပဲ ဖြစ်ရမယ်။
ရှာသာ ရှာနေတာ မတွေ့။ အချို့ လင့်ခ်တွေမှာ အိမ်တွင်းပုန်းမိသားစု အကြောင်း ဖော်ပြထားတာတွေ ရှိပေမယ့် သူတို့ ကိုယ်တိုင် ဝင်ရောက် ဆွေးနွေး နေတာ မဟုတ်။ ရှာရင်းနဲ့ မော လာတယ်။ ငါရှာတာ များ စောနေလို့လား။
ကျုပ် တစ်ပတ် လောက် ထပ်စောင့်ပြီးတော့ ထပ်ဝင် ရှာမယ်လို့ တွေးလိုက်တယ်။ ဟုတ်တယ်လေ။ သူတို့သာ အသစ်တစ်ခု တည်ထောင်မယ် ဆိုရင် အခု ရှာဖို့ဆိုတာ အချိန်စောသေးတယ်။ ဒါ့ကြောင့် ကျုပ် တစ်ပတ် အချိန် ထပ်ပေးလိုက်တယ်။ ဒီတစ်ပတ်ထဲမှာ ကျုပ် အခြားသော အချက်အလက် တွေကို ဆက်လက် ရှာဖွေနေမိတယ်။
တကယ်တော့ မြေအောက်ကွန်ယက်ဆိုတာ အဆုံးအစမဲ့တဲ့ သွေးကြောတွေလိုပဲ။ ဒီသွေးကြောကို စတင်ခြေချမိတဲ့ ပထမဆုံးနေ့ကထဲက ကျုပ် သိလိုက်တယ်။ ကျုပ် ဘယ်တော့မှ ထပ်ပြီးတော့ ဂူဂဲလ် လောက်နဲ့ သုံးတာ မကျေနပ်နိုင်တော့ဘူးလို့။
မြေအောက်ကွန်ယက်တွေဟာ တစ်ခုဖော်လေ နောက်တစ်ခု စိတ်ဝင်စားစရာ တွေ့လေနဲ့ အဆုံးအစ မရှိ စိတ်ဝင်စားစရာ အတိနဲ့ ပြီးနေတယ်။ ဒါ့ကြောင့် အကြောင်းတစ်ခုထဲမှာ ကျုပ် စိတ်နှစ်ထားရတာကို ငြီးငွေ့လာမိတယ်။
ကျုပ်အတွက် အသစ်တွေလိုအပ်တယ်။ စူးစမ်းချင်စိတ် ပြင်းထန်လာနိုင်တဲ့ အချက်အလက်သစ် တွေကို လိုလား တယ်။ အိပ်လို့မရနိုင်လောက်အောင် ဖမ်းဆွဲထားနိုင်တဲ့ ခြောက်ခြားစရာ သတင်းတွေ ကျုပ်ငတ်မွတ် လာတဲ့ အတွက် ကျုပ် ဆက်လက်တူးဖော်မိတယ်။
ဒီလိုနဲ့ ညစ်ညမ်းလင့်ခ်တွေကလွဲလို့ စုံနိုင်သလောက် စုံအောင် ကျုပ်ဟာ ကွန်ယက်ထဲကို ဖြန့်ကျက်နေ မိတယ်။ တစ်နေရာမှာတော့ လူ့အရေပြားနဲ့ လုပ်ထားတဲ့ လက်မှုပစ္စည်းလေးတွေ ရောင်းနေတာ တွေ့ ခဲ့ တယ်။ အတုထင်မိလိုက် ပေမယ့် တစ်နေရာမှာ လုပ်ပုံလုပ်နည်း သင်ပြတဲ့အခွေတွေ တွေ့တော့မှ ကျုပ် အိပ်ချင်စိတ်တွေ ဘာတွေ ပြယ် သွား တယ်။
နောက်တစ်နေရာမှာ ကျတော့ ဆိုင်ယန်နိုက်ဆေးတောင့်လေးတွေနဲ့ အခြား မူးယစ်ဆေး/ သေနတ် တွေ ရောင်းဝယ် လေလံပစ်နေတာ တွေ့တယ်။ အားလားလား... တကယ့်ကို အထူးအဆန်း တွေ ချည့်ပဲ။
ကျုပ် ဘာတောင်တွေ့ခဲ့သလဲဆိုတော့ "သတ်သေခန်း" ဆိုတဲ့ နာမည်နဲ့ ဝက်ဘ်ဆိုက် တစ်ခု တွေ့မိတယ်။ ဒီအထဲမှာတော့ youtube ထဲကလိုမျိုး ဗီဒီယိုတွေ အများအပြား တင်ထားတယ်။ ထူးခြား တာက ကိုယ့်ကိုယ်ကို သတ်သေတဲ့ ဗီဒီယိုတွေ။ သို့သော် အခွေတွေဟာ အမြည်းလောက်ပဲ ပြထားပြီး ဆက်လက်ကြည့်လိုသူက ပိုက်ဆံပေးမှ အဆုံးထိ ကြည့်လို့ ရတယ်။
ရိုက်ကူးသူတွေက ပြင်ပလောကမှာ ဗီဒီယို ထုတ်လုပ်သူတွေလိုမျိုးပဲ။ သူတို့ကို သတ်သေလိုသူက သွားဆက်သွယ်ရတယ်။ ပြီးတော့ ကိုယ်သေချင်တဲ့ ပုံစံကို ပြောပြတယ်။ ဒီပုံစံကို သဘောကျရင် လိုအပ်တဲ့ပစ္စည်း အထောက်အပံ့ ဆက်တင် အစအဆုံး ထုတ်လုပ်သူက စီစဉ်ပေးတယ်။ ပြီးတော့မှ သေမယ့်နေ့မှာ စာချုပ်ချုပ် ရုပ်ရှင်ရိုက် ရဲရဲသေ။ ပြီးပြီ။
အဲဒီအထိ မထူးဆန်းသေးဘူးလို့ ပြောလို့ ရတယ်။ ကျုပ်ဝင်ကြည့်နေတဲ့ ရက်က ကျင်းပနေတာ "သတ်သေ ပြိုင်ပွဲ" တဲ့။ ဒီမှာကျတော့ သတ်သေ လို သူ တွေကို ဖိတ်ခေါ်တယ်။ မျက်လုံးတွေ ဘာတွေ တောင် ပြူးသွားတယ်ဗျို့။
ပြိုင်ပွဲဝင်သူတွေက ပိုက်ဆံပေးပြီး ဝင်ကြည့်ရတယ်။ ကိုယ်သေစေ ချင်တဲ့ သူကို ဘာနဲ့ သေခိုင်း ချင် တယ် ဆိုတာကို နည်းစနစ်ရွေးပြီးတင်ပြရတယ်။ အကောင်းဆုံး သေ နည်းကို စဉ်းစားနိုင်တဲ့ သူက သေသူပိုင်ဆိုင်တဲ့ တစ်ခုခုနဲ့ ဆုငွေ ရတယ်။ ကဲ.. မရူးသွပ်လွန်းဘူးလား။
နောက်ဆုံး အိပ်မရတဲ့ ညတွေ တစ်ရက်ပြီး တစ်ရက် ဆက်လာခဲ့တာမှာ... ကျုပ်စောင့်နေတဲ့ အချိန် တစ်ပတ် ပြည့်တဲ့နေ့ကို ရောက်လာခဲ့တယ်။
ဒီတော့ ကျုပ်လဲ ထုံးစံ အတိုင်း အိမ်တွင်းပုန်း မိသားစုများကို ပြန်ရှာကြည့်တာပေါ့။ မထူးခြား။ တကယ် ကို ဖျက်သွားပြီ ထင်ပါ့။ ဒါမှမဟုတ်လဲ ဖြစ်နိုင်ချေရှိတာ တစ်ခုက သူတို့ ဒီ့ထက် ပိုနက်တဲ့ ကွန်ယက်ထဲ ကျင်လည်နေပြီ ထင်တယ်။
အဲ့ဒီညက ကျုပ် မြေအောက် ကွန်ယက် အနှံ့ စိတ်ကြိုက် ရှာဖွေပြီး လို့ မတွေ့တော့ တဲ့အဆုံး လက်လျှော့ လိုက်တော့မယ်လို့ ကြံတုန်းမှာ.... ဝက်ဘ်ဆိုက် လင့်ခ်တစ်ခု ကွန်ပျူတာ မျက်နှာပြင် ပေါ်ကို တက် လာတယ်။
နာမည်က "ဦးတည်ရာမဲ့တဲ့လမ်း" တဲ့။ ဒီတော့ ကျုပ်လဲ ဘာရယ်မဟုတ်.. စိတ်ထဲက နှိပ် ချင် လာတဲ့ အတွက် ဝင်ဖို့ နှိပ်လိုက်တဲ့ အခါ ကျုပ် မျက်ဝန်း အစုံဟာ ဝိုင်းစက် သွားပါ တော့တယ်။
တွေ့ပြီ။ ဖိုရမ်ကို။ ဒါပေမယ့်... ဖိုရမ်အနေနဲ့ မဟုတ်တော့...။ ဝက်ဘ်ဆိုက် တစ်ခုဖြစ်နေပြီ။ ဆွေးနွေးမှု တွေ တစ်ခု ဆို တစ်ခုမှ မရှိတော့။ ဒါတွေအစား မိသားစုပုံတွေဟာ အယ်လ်ဘမ် တစ်ခုစီ ဖွဲ့လို့ နေရာ တကျ စုစည်းထားတယ်။ ပြတိုက်တစ်ခုထဲ ရောက် သွား သလိုပေါ့။
ဓာတ်ပုံတွေဟာ သန့်ရှင်းတဲ့ မြေအောက်ခန်းလို အခန်းထဲမှာ ရိုက်ထားတဲ့ ဓာတ်ပုံတွေဖြစ်တယ်။ စိတ္တဇကား ဆန်တဲ့ အရောင်အသွေးတို့နဲ့ မွှန်းခြယ်ထားတယ်။ ဒါပေမယ့် သူတို့ ပျော်နေကြတယ်။ ကလေးတွေကလဲ ရယ်မောလို့ လူကြီးတွေ ကလဲ ဝတ်ကောင်းစားလှတွေနဲ့။
ဝက်ဘ်ဆိုက် တစ်ခုလုံးကို သေချာ လေ့လာကြည့်တော့မှ ဒီဝက်ဘ်ဆိုက်ဟာ ဘာနဲ့ အလားသဏ္ဍာန် တူနေသလဲဆိုရင် အိမ်ငှား ကြော်ငြာတွေလိုပဲ။ သို့သော် အိမ် အစား မိသားစု ဖြစ်နေတာလေးတစ်ခုပဲ။
ဟုတ်တယ်။ မိသားစု တွေ ကြော်ငြာထားတာလို့ ပြောရမယ်။ သူတို့နဲ့ အတူနေချင်တဲ့ လူကိုရှာနေတဲ့ ဝက်ဘ်ဆိုက် တစ်ခု ဖြစ်တယ်။ ဒီမှာ ထူးခြားချက်တစ်ခုရှိတယ်။ မိသားစု တစ်ခုမှာ အတူလာရောက် နေထိုင်လိုသူ တွေဟာ ဒီမိသားစု ရဲ့ လိုအပ်ချက် ဝိသေသ လက္ခဏာတွေ ပါရှိရမှာ ဖြစ်တယ်။ အတိအကျကို ညွှန်းဆိုထားတဲ့ ဝိသေသ လက္ခဏာတွေ ဖြစ်တယ်။
ဘယ်လောက်တောင် တိကျသလဲ ဆိုရင် ဥပမာ - "လာ ရောက် နေထိုင်လိုသူသည် ကျယ်ကားသော မေးရိုးတို့ ရှိရမည်။ ကျုပ်တို့မိသားစု တစ်ခုလုံးမှာ မေးရိုးကျယ်သောကြောင့် ဖြစ်သည်။" တို့...၊ "သင် သည် အရပ် ၅' ၁၀" တိတိရှိရမည်" တို့....၊ ယုတ်ဆွအဆုံး "သင့်တွင် ကျွန်ုပ်တို့ကဲ့သို့ အသံသြဇာ ခမ်းခမ်းနားနား ရှိရမည်" တို့ စသဖြင့် တိတိကျကျကို လိုအပ်တဲ့သူကို ညွှန်းဆိုထားတာဖြစ်တယ်။
ဒီလိုနဲ့ ဖတ်လာခဲ့ရင်း အောက်ဆုံးနား အရောက်မှာ မှိန်ပျပျ လင့်ခ် ကလေးတစ်ခု ကို အမှတ်မထင် တွေ့မိလိုက်ပြန်တယ်။ အမည်းရောင် နောက်ခံပေါ်မှာ မီးခိုးရင့်ရောင် လင့်ခ်လေး တစ်ခု။ နှိပ်ကြည့် လိုက်တဲ့ အခါမှာတော့ ကျုပ်ကို နောက် စာမျက်နှာ တစ်ခုဆီကို ခေါ်ဆောင်သွားတယ်။
"ဆွေးနွေးခန်း" တဲ့။ တွေ့ပြီ ဖိုရမ်ကို။ ဒါပေမယ့်... စောစောက ဝက်ဘ်ဆိုက်နဲ့ မတူတဲ့ အေးစိမ့်မှုကို ဒီအထဲမှာ ခံစားနေ ရတယ်။ လေးနက်မှု၊ ခါးသီးမှု၊ နာကျင်မှုတွေနဲ့ ဖိုရမ်ကို တန်ဆာ ဆင်ထားတယ်။ အဓိက ကွာခြားချက်အနေနဲ့ဆိုရင် စောစောက ဝက်ဘ်ဆိုက်မှာ ဖိတ်ခေါ်လိုစိတ်လေးက စာမျက်နှာ ပေါ်မှာ ကိန်းဝပ်နေတယ်။ လူကြီးတစ်ယောက်ကို လာစေလိုတဲ့ အတွက် မိသားစုက ဖိတ်ခေါ်တာမျိုး။
ဒီဖိုရမ်ကတော့ ထူးခြားတယ်။ ကျုပ် ကျောရိုးထဲ စိမ့်သွား လောက် အောင် ကြက်သီးမွှေးညှင်းတွေ ထ သွားခဲ့တယ်။ ဒီဖိုရမ်ဟာ လူငယ်/ ကလေးတစ်ယောက်ကို လိုအပ်တဲ့ မိသားစု တွေ တွေ့ဆုံပြီး ကလေးလဲလှယ် တဲ့ နေရာဖြစ်တယ်။ ဆွေးနွေးမှုတွေ ရှိတယ်။ ကလေးသစ် တစ်ယောက်ကို ကြိုဆို နည်း ကြိုဆိုဟန်ကို သင်ပြမှုတွေလည်း ရှိ တယ်။ လဲလှယ် သူချင်း ကတိကဝတ်တွေ ရေးသား ထား တယ်။ ဒီမှာကျုပ် ပြဿနာများ ဆိုတဲ့ ကဏ္ဍကို အထူးသတိပြု မိခဲ့တယ်။
ဒီအထဲဝင်ကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာတော့... ကဏ္ဍခေါင်းစဉ် အောက်မှာ ရှိတဲ့ ဒုတိယမြောက် sticky post ကို စိတ်ဝင်စား မိတယ်။ ဆွေးနွေးနေတဲ့ အကြောင်းအရာက "တတိယချာတိတ် အတုဖြစ်နေခြင်း" တဲ့။ ပို့စ်ပိုင်ရှင်က အမျိုးသမီး။ အိမ်ထောင်မရှိ။ သူမ အနေနဲ့ ရှေ့မှာ ကလေးနှစ်ယောက်ကို ဒီဖိုရမ်ကနေပဲ ရှာဖွေယူခဲ့တာ ဖြစ်ပြီး ဒီနှစ်ယောက်က အစစ အရာရာ အဆင်ပြေတယ်။ ဒါပေမယ့် တတိယ တစ်ယောက် လောက် ယူဦးမယ်ဆိုပြီးတော့ ထပ်ယူခဲ့တဲ့အခါမှာ အဆင်မပြေဘူးလို့ ဆိုတယ်။
သူပြောပုံအရတော့ ကလေးဟာ တစ်ပတ်ရစ်ကလေး ဖြစ်ပြီး တော့ သူမ အရှေ့မှာ မိသားစု တစ်စုက စတင်ခေါ်ယူ ခဲ့ဖူးတယ်။ "အရမ်းငိုလွန်းတဲ့အတွက်" ဆိုတဲ့ အကြောင်းပြချက် နဲ့ ဒီမိသားစုဟာ သူမ လက်ထဲကို လာထည့်ခဲ့တဲ့ အခါမှာ သူမရဲ့ လိုအပ်ချက် တစ်ခုဖြစ်တဲ့ ဆံပင် အမည်းရောင် ကလေးမှာ မရှိ။ ဒီတော့ ကလေးကို ဆံပင် အမည်းဆိုးပေးပြီးတော့ သူမဆီကို လာပေးသွားတာပဲ။
စာဖတ်သူ ခင်ဗျားတို့တော့မသိ။ မျက်မြင်ဖတ်နေရတဲ့ ကျုပ်အတွက် တောင် ဒါ လုံးဝ အဓိပ္ပာယ်မရှိတဲ့ စကားတွေပဲ။ သို့သော်.. ဖိုရမ်တစ်ခုလုံး နီးပါးက လူတွေဟာ သူမရဲ့ ခေါင်းစဉ် အောက်မှာ စုစည်းလို့ သူမကို လာနှစ်သိမ့်နေခဲ့တယ်။ သူမရဲ့ အခက်အခဲကို ဘယ်လို နားလည်ကြောင်း တစ်ယောက် က ပြောတယ်။ နောက်တစ်ယောက်က သူလဲ ထပ်တူ ဖြစ်ရပ် မျိုး ဖြစ်ဖူးတယ်လို့ဆိုတယ်။ "အရိုးမာတယ် ဆိုတဲ့ ကလေး တူတူဆော့နေရင်းနဲ့ တစ်ရက်တောင် မကြာဘူး၊ အရိုး ကျိုးသွားတယ်။"တဲ့။ ဒီ ဒုတိယ ပုဂ္ဂိုလ်ကဆိုတယ်။
ဖတ်ရင်းဖတ်ရင်းနဲ့ ဝက်ဘ်ဆိုက်မှာရော ဖိုရမ်မှာရော သူတို့ရဲ့ ဝိသေသ သတ်မှတ်ချက်တွေ ထားရှိ ရခြင်းရဲ့ အကြောင်းအရင်း ကို ကျုပ်နားလည်လာ ခဲ့တယ်။ အကယ်၍သာ ပတ်ဝန်းကျင် က တွေ့ရှိ ခဲ့မယ် ဆိုရင် ကြည့်လိုက်တာနဲ့ ဒီမိသားစုဟာ အမျိုး တော်စပ်ပါတယ် လို့ ပြောလို့ရအောင် သူတို့နဲ့ ပုံသဏ္ဍာန် အတူဆုံး ကလေးတွေ/ လူကြီးတွေကို စနစ်တကျ တိတိကျကျ ရှာနေခဲ့တာပဲ။
အဲ့သည် အကြောင်းကြောင့် အခု လိုအပ်ချက်ကို လိမ်ပြီး ထား သွားခဲ့တဲ့ ကလေးကို အမျိုးသမီးအနေနဲ့ ဘယ်လိုမှ ဆက်ထားဖို့ မဖြစ်နိုင်တော့တာပဲ။ ဒါ့ကြောင့် သူမအနေနဲ့ နောက်ထပ် ဒီကလေးကို ခေါ်လို သူ ရှိလေမလားလို့ လာရောက် ရှာဖွေခြင်း ဖြစ်တယ်။ ဖိုရမ်တစ်ခုလုံးက လူတွေဟာ သူမကိုတော့ သနား သော်လည်း အရမ်းငိုပြီးတော့ ဆံပင် အနက် မဟုတ်တဲ့ ကလေးကို မခေါ်လိုကြဘူး။ ဒီအခါမှာ အမျိုးသမီးက နောက်ဆုံး တော့ ရက်သတ်မှတ်ချက် တစ်ခု ထုတ်ပြန် ထားတာ ကို ကျုပ်ဖတ်လိုက် ရတယ်။
"သြဂုတ် ၃ ရက်နေ့မှ သူ့ကို ယူမယ့်လူမပေါ်ခဲ့ရင်တော့.. မတတ်နိုင် ဘူးရှင်.. ကျွန်မ လုပ်ထုံးအတိုင်း စီရင် ရတော့မှာ ပေါ့။"
ဒီကနေ့ဟာ သြဂုတ် ၁ ရက်နေ့။ လူအချို့က သူမ စကားကို အကြောင်းပြန်ထားတယ်။ တစ်ယောက်က - "အိုး.. သနား စရာ ကလေးပါလား.. ဒါပေမယ့် ဘယ်တတ်နိုင်မလဲ.. မိန်းကလေး ဘက်က တရား သဖြင့် စီရင် တာပဲ။ အားပေးတယ်။ ချ" တဲ့။ နောက်တစ်ယောက်ကလည်း - "ကောင်းတယ် ညီမ။ ကိုယ်စိတ်ချမ်းသာဖို့ အရေးအကြီးဆုံးပါ။" တဲ့။ ဘယ်တစ်ဦး တစ်ယောက်ကမှ ကလေးငယ် ဘက် ကနေ ပြီးတော့ ရပ်တည်ပေးမယ်၊ စာနာပေးတယ်ဆိုတာ မတွေ့ရဘူး။ ယူမယ့်လူလည်း တစ်ယောက် မှ မပေါ်လာ ခဲ့ဘူး။
ဒါ့ကြောင့် ကျုပ် ဘဝမှာ လုံးဝ မလုပ်သင့်တဲ့ ကိစ္စ တစ်ခုကို ကျုပ် ပထမဆုံးနဲ့ နောက်ဆုံး အကြိမ် လုပ် ခဲ့မိတယ်။ "ကျုပ် ကလေးကို ယူမယ်။ ဆက်သွယ်ပါ။" ဆိုတဲ့ စာတိုလေး တစ်စောင် ဒီအမျိုးသမီး ဆီ ကို စာပို့လိုက်ခြင်းပဲ ဖြစ်တယ်။ ကျုပ်အနေနဲ့ ပြန်စာကို သိပ်တော့ မမျှော်လင့်နေခဲ့ပါဘူး။ ပထမ တစ်ခေါက် တုန်းကလို ဖိုရမ်ကြီး တစ်ခုလုံး အစဖျောက်ပြီးတော့ ထွက်ပြေး တော့မယ်ပဲ ထင်ခဲ့မိတယ်။ ကျုပ် တက်တက်စင် အောင် လွဲသွားပါတယ်။ ၁၅ မိနစ်တောင် မရှိလိုက်သေးခင် အချိန်မှာ အမျိုးသမီး ဆီက ပြန်စာ ရောက်လာတယ်။
"ကျေးဇူးကြီး ပါပေ့ရှင်။ ကျွန်မတော့ဖြင့် လုပ်ထုံးအတိုင်း စီရင် ရတော့မယ် ထင်နေမိတာ။ ပြီးတော့ အိမ်က အကြီးနှစ်ကောင် က ဒါမျိုးစီရင်တာ တစ်ခါမှ မတွေ့ဖူးတော့ သူတို့ရှေ့မှာ လုပ်ဖို့ လဲ ကျွန်မ ကြောက်ရွံ့နေခဲ့မိတာ။ ရှင် ကယ်ပေလို့ပေါ့။ ကောင်း ပါပြီရှင်။ ဒါနဲ့ ရှင့် မိသားစု အကြောင်း မိတ်ဆက် ပါဦး။ ဘာရယ် တော့မဟုတ်ပါဘူး။ လဲလှယ်သူတွေရဲ့ ကတိကဝတ် အရပါ။ ရှင်လဲသိမှာပါ။"
ဒါနဲ့ ကျုပ်လဲ လိမ်လည်ပြီးတော့ လိုတိုရှင်းလေးနဲ့ စာပြန် ရ တာပေါ့။ "အိမ်ထောင်ရှင်ပါ။ သမီး တစ်ယောက်ရှိပါတယ်။ ဆံပင်အနက်ပါ။ ပုံထဲက ကောင်လေးဆိုရင် သမီးကို မောင်လေး တော်ချင် လားလို့ သူ့ကို မေးတော့ သမီးက လိုချင်ကြောင်းပြောတာနဲ့ ခုလို စာပို့ လိုက် ရခြင်း ဖြစ်ပါတယ်။"
ဒီနောက်တော့ ကျုပ်နဲ့ အမျိုးသမီးနဲ့ဟာ သူ့ဆီက လာရောက် ခေါ်ဆောင်ရမယ့် နေရာရယ် အချိန်ရယ် ဝတ်လာရမယ့် အင်္ကျီ အရောင်ရယ် စသဖြင့် အသေးစိတ် အချိန်းအချက် လုပ်ထား လိုက်ပါတယ်။
ဒီ့နောက် ကျုပ် စားပွဲပေါ်မှာ ထိုင်ရင်း စဉ်းစားတယ်။ အခုမှ အသိပြန်ဝင်လာတဲ့ လူတစ်ယောက်လို "ဟာ..! ငါ ဘာတွေ များလုပ်ခဲ့လိုက်တာလဲ။ အသိဉာဏ် ကင်းမဲ့ လှချည်လား။" ပေါ့။
အခုတော့ အားလုံး ကျွံသွားခဲ့ပြီ။ နောက်ပြန်ဆုတ်ဖို့ မဖြစ်နိုင် တော့ဘူး။ ဒါဆို ဘာလုပ်ရမလဲ။ ငါ ရဲ ခေါ် သင့်လား။ ငါ ရဲတွေကို ဒီကိစ္စပြောလိုက်တဲ့ အခါ ဒီ မြေအောက် ကွန်ယက် အထဲမှာ ခြေရှုပ်ခဲ့တဲ့ ငါ့အပေါ်ရော တရားဥပဒေက ခွင့်လွှတ် မှာလား။ လူစွမ်းကောင်း လုပ်ပြီးတော့ ကလေးတစ်ယောက်ကို ကယ်တင်မိတဲ့ ဆုလာဘ်က ထောင်ဒဏ် ဖြစ်သင့်သလား။
ကျုပ် ကြောက်လန့် နေမိပါပြီ။ အလွန်အမင်းကို တုန်လှုပ် ကြောက်လန့်နေမိပြီ ဖြစ်ပါတယ်။ တစ်စုံ တစ်ယောက်က ကျုပ်မှန်းသိသွားမှာကို ကြောက်နေတယ်။ သိသွားတဲ့အခါ သတင်းတွေက နိုင်ငံကျော် ရုံမက ကမ္ဘာပါကျော်ပြီး ထောင် ကျမယ့် ကိန်းပါ။
ကမ္ဘာ အနှံ့ကလူတွေက ကျုပ်ကို ပြောလိမ့်မယ်။ "ဒီကောင်လား... လူ့အန္ဓပါကွာ။ ကလေးတစ်ယောက် ရဲ့ အသက်ကို တော့ ကယ်ပါရဲ့။ ဒါပေမယ့် ဒီ ကယ်တင်မှု မတိုင်ခင် ဒီ ကောင် မြေအောက် ကွန်ယက် ထဲ ဘာတွေလုပ်ခဲ့လဲ။ ဒုစရိုက်သမား လား။ မုဒိန်းသမားလား။ ကြေးစားလူသတ် သမားလား။ ဘယ်သူကမှ မသိနိုင်ပဲ။"
ဒီ အတွေးတွေနဲ့ ကျုပ် စိတ် ပိုပြီးတော့ ဖိစီး လာခဲ့တယ်။ ကျုပ် ဘာလုပ် သင့်သလဲ။ ကလေး တစ်ယောက် ကို ကယ်ပြီးတော့ တစ်ကမ္ဘာလုံးက အရှက်တွေ သိမ်းပိုက်လို့ ထောင်ထဲကို သွားမလား။ ဒါမှမဟုတ် ကလေးရဲ့ ကံကြမ္မာကို ဒီအတိုင်း လွှတ် ထားလို့ ဒီကိစ္စ ဘာမှ မဖြစ်ခဲ့သလိုပဲ ကျုပ်နေသွား သင့်မလား။
ရေဒီယိုမှ သတင်းကြေငြာသံ ပျံ့လွင့်နေသည်။
"ကျန်းမာတော် မူကြပါစရှင်။ ဒီကနေ့ည အထူး သတင်းအနေနဲ့ တင်ပြဖို့ ရှိတာကတော့ "ဆင်ခြေဖုန်း ရပ်ကွက်မှာ လေးနှစ်သား ကလေးငယ် အလောင်းတစ်လောင်း ရှာဖွေတွေ့ရှိမှု" ဖြစ်ပါ တယ်ရှင်။ အခင်း ဖြစ်ပွားပုံကို တွမ်ကနေပြီး ပြောပြ ပါလိမ့်မယ်ရှင့်။"
တွမ် - "ကျေးဇူးပါ ဘသ်ရေ။ ရဲစခန်းက အတည်ပြုချက်အရ ဒီကလေးငယ်ဟာ လွန်ခဲ့တဲ့ ၂နှစ် လောက်တုန်းက နေ့ ကလေးထိန်း ကျောင်းကနေ ပျောက်ဆုံးသွားခဲ့တဲ့ ကလေး ဖြစ်ပါတယ် ခင်ဗျာ။ ဒီအမှုဟောင်းနဲ့ ပတ်သက် ပြီးတော့ ကလေးထိန်းကျောင်း ပိတ်ခဲ့ရပြီး ကလေးခိုးဂိုဏ်းနဲ့ ပတ်သက် လို့ အစိုးရပိုင်းမှ တော်တော် ဂယက် ရိုက်ခဲ့ဖူးတာကို မိဘ ပြည်သူများ ကြားမိကြ လိမ့်မယ် ထင်ပါတယ်။ ကလေးငယ် အလောင်းမတွေ့မီ လွန်ခဲ့တဲ့ ရက် အနည်းငယ်ကတော့ ရိုဆန်ဒေးလ် ရဲစခန်းကို လူ တစ်ယောက် ဒီကိစ္စနဲ့ ပတ်သက် ပြီးတော့ သတင်းပို့တယ် လို့လဲ ရဲစခန်းက ဖွင့်ပြောချက် အရ သိရှိရ ပါတယ်။ အခု ကျွန်တော်တို့ သတင်းဌာနမှာ ဒီစကားပြော အခွေလေး ရှိနေပါတယ်။ မိဘ ပြည်သူများ နားဆင်ကြည့်ကြဖို့ ဖွင့်ပြလိုက် ရပါတယ် ခင်ဗျား။"
၉၁၁ ဖုန်းကိုင် အော်ပရေတာ - "နိုင်းဝမ်းဝမ်းကပါ။ ဘာကိစ္စလဲ။"
အမည်မသိ ခေါ်ဆိုသူ - "ကလေးတစ်ယောက်အသက်ခံရတော့မယ် ကျုပ်ထင်တယ် ဆရာရေ!"
၉၁၁ ဖုန်းကိုင် အော်ပရေတာ - "ဘာ..? ဘယ်လို?! အခု ဘယ်က ခေါ်နေတာလဲမသိဘူး။"
အမည်မသိ ခေါ်ဆိုသူ - "ဟာ.. ဒါတော့..ပြောလို့မရဘူး ဆရာကြီး။ မရဘူး မရဘူး။ လုံးဝမရဘူး။ ကျုပ်ပြောတာသာ နားထောင်စမ်းပါ။ ဒီလိုဗျ... ကျုပ် အင်တာနက်ကနေ ဝက်ဘ်ဆိုက်တစ်ခု တွေ့တယ်။"
၉၁၁ ဖုန်းကိုင် အော်ပရေတာ - "ဘာဝက်ဘ်ဆိုက်လဲ။"
အမည်မသိ ခေါ်ဆိုသူ - "ဟာဗျာ..ဝက်ဘ်ဆိုက်ပါဆို။ ဝက်ဘ်ဆိုက်ပေါ့။ မြေအောက်ဗျာ။ အိမ်တွင်းပုန်း တွေလေဗျာ။ အိမ်တွင်းပုန်း မိသားစုတွေ စုဝေးတဲ့ ဝက်ဘ်ဆိုက်ဗျာ။ ပြီးတော့ သူတို့ ကလေး တွေ ခိုးတယ် သိလား။ ပြီးတော့ ကျုပ်ပြော.."
၉၁၁ ဖုန်းကိုင် အော်ပရေတာ - "နောင်ကြီး.. စိတ်ကို ငြိမ်ငြိမ်ထား ပြီးပြောပါ။ တစ်ခုချင်းစီ ရှင်းအောင် ပြော။ ဒီ ဝက်ဘ်ဆိုက်ရဲ့ လိပ်စာက ဘာလဲ။ ပြီးတော့ ခင်ဗျား အခု ဘယ်ကနေ ဖုန်းဆက်နေသလဲ။"
အမည်မသိ ခေါ်ဆိုသူ - "ဟေ့ဆရာကြီး! ခင်ဗျားအရစ်ရှည်နေတာနဲ့ ဟိုကောင်မ က ကလေးကို *ပြတ်တောင်းပြတ်တောင်း ဖြစ်သွားသည်* ။ ကလေးက ပြန်ပေးဆွဲခံခဲ့ရတာဗျ။ သူမ ကိုယ်တိုင် ပြန်ပေးဆွဲလာတာ။ ခင်ဗျားတို့နောက်ကျနေရင် ကလေးတော့ အသတ်ခံရတော့မှာပဲဗျာ! လာခဲ့ လာခဲ့။ လိပ်စာက xxxxx xxxxx xxxxx မှာပဲ။ ၅ နာရီ မတိုင်ခင် လာပေးပါ ဆရာကြီးတို့!"
၉၁၁ ဖုန်းကိုင် အော်ပရေတာ - "ဟယ်လို ဟေ့လူ နေဦးလေ။ ဟယ်လို...ဟာ!"
တွမ် - "ဆက်လက် စုံစမ်းချက်များအရ ဒီကလေးငယ်ဟာ ကလေးခိုးဂိုဏ်းတွေရဲ့ လက်ချက်မိခဲ့တဲ့ ကလေးတစ်ဦး ဖြစ်နိုင် နေတာမို့ ရဲအရာရှိကြီး xxxx အပါအဝင် ရဲတပ်ဖွဲ့ဝင် များဟာ သတင်းရတဲ့ နေရာကို ၅ နာရီ မတိုင်မီ သွားရောက် ရှာဖွေခဲ့ပါတယ်။ အခင်းဖြစ်ပွားခြင်း တစ်စုံတစ်ရာ မရှိတဲ့ အတွက် ပြန်လာခဲ့ပြီး သေချာအောင် နောက်တစ်နေ့ ဖြစ်တဲ့ သြဂုတ်လ ၃ ရက်နေ့မှာ ထပ်မံ သွား ရောက် ရှာဖွေရာမှာ ကလေးအလောင်းကို တွေ့ရှိခဲ့ရခြင်း ဖြစ်ပါတယ်။ မှုခင်း ဆရာဝန်ရဲ့ ဆေးစစ်ချက် အရ ကလေးဟာ လည်ပင်းညှစ် အသတ်ခံခဲ့ရတာဖြစ်ပြီးတော့ ကျူးလွန်သူရဲ့ ဒီအန်အေ လက်ဗွေရာ ဆံပင် စသဖြင့် သဲလွန်စ တစ်ခုမှ မကျန်အောင် သေသေသပ်သပ် သတ်သွားခဲ့ခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ ဒီ အမည်မသိပုဂ္ဂိုလ် ခေါ်ဆိုခဲ့တဲ့ ဖုန်းဟာ လည်း အလောင်း တွေ့ခဲ့တဲ့ အနားက လမ်းဘေးဖုန်း မှ ဖြစ်တဲ့ အတွက် သတင်း ပေးသူ ဟာလဲ ဒီကလေးခိုးဂိုဏ်းနဲ့ တနည်း တဖုံ ပတ်သက် ဆက်နွယ် နေမယ်လို့ ရဲအရာရှိများက သုံးသပ်ထားပါတယ်။ နောက်ဆုံး သတင်းများအရ အခု အရာရှိတွေဟာ ကလေး ငယ် ပျောက်ဆုံးနေခဲ့တဲ့ ၂ နှစ်လုံး ဘယ်ရောက်နေတယ် ဆိုတာကို ဆက်လက်စုံစမ်း ထောက်လှမ်း နေပါ တယ် ဆိုတာကို ကျွန်တော်တို့ သတင်းဌာနက ဆက်သွယ် မေးမြန်းရာ ဖြေကြား ပေးခဲ့ပါတယ် ဘသ်ရေ။"
ဘသ် - "ဟုတ်ကဲ့ပါရှင်။ ကျေးဇူးပါ တွမ်ရေ။ ဒါ အလွန် ဝမ်းနည်းစရာ သတင်းပါပဲရှင်။ ခု တစ်ခါ နောက်ထပ် ဖော်ပြပေးမယ့် သတင်းကတော့... xxxx"
ref: Underground Families ကို မှတ်စုကြမ်း မှ ဘာသာပြန်ဆိုသည်။ ‪#‎kyawnge‬
July 22 at 10:48pm ·
DEEP WEB သို့မဟုတျ မွအေောကျကှနျယကျ
အမှနျတကယျ ဖွဈရပျတှပေါ စိတျဝငျစားဖို့ကောငျးပါတယျ...
မွအေောကျကှနျယကျ ဆိုတာ သမားရိုးကြ Google လို ရှာဖှရေေး စနဈနဲ့ ရှာမတှနေို့ငျတဲ့ အခွား တဈဖကျမှာ ရှိတယျ။ ဒီကှနျယကျထဲကို ဝငျရောကျဖို့ဆိုရငျ ခငျဗြားကို အမညျမသိ လူတဈယောကျ အဖွဈ ဖြောကျကှယျ ထားပေးနိုငျမယျ့ ဆော့ဖျဝဲ တဈခြို့ လိုကောငျး လိုအပျမယျ။ ၎င်းငျး ကှနျယကျ ထဲမှာ ခငျဗြား အနနေဲ့ စိတျတောငျ မကူးဝံ့သော ရကျစကျမှုတှေ၊ အျောဂလီဆနျမှုတှေ နဲ့ မွအေောကျ လှုပျရှားမှုတှေ ရှိတယျ။
အမှောငျ ဝီကီပိဒိယ ဆိုရငျ.. ဒီကမ္ဘာ တဈဖကျရဲ့ လမျးပွမွပေုံ သဖှယျ အလုပျလုပျတယျ။ အမှောငျ ဝီကီပိဒိယကို ခငျဗြား ဝငျရောကျနိုငျ ခဲ့ပွီ ဆိုတာနဲ့ ဒီ ကှနျယကျကွီးတဈခုလုံးမှာ ကွညျ့ရှု လလေ့ာ လို့ ရတဲ့ လငျ့ချ တှကေို တှမွေ့ငျရမှ ဖွဈတယျ။ ကြုပျ တဈသကျမှာ တဈခါပဲ မွအေောကျ ကှနျယကျ မှာ ကငျြလညျခဲ့ဖူး သေးတယျ။
ဒီကို ရောကျဖို့ ဆိုတာ တကယျ ခကျတယျ။ အီးမေးလျထဲက Spam ပုံးထဲမှာ ရောကျနတေဲ့ ဖိုငျ တဈခု ကို ကြုပျ သတိပွုမိတဲ့ နကေ့ စ တာပဲ။ ညှနျကွားခကျြမပါ လမျးညှနျခကျြမပါတဲ့ ဆော့ဖျဝဲ ကို ကြုပျ ကှနျပြူတာထဲ တဈမြိုးပွီး တဈမြိုး စမျးသပျလို့ ထညျ့ကွညျ့ နမေိတယျ။ ကိုယျတိုငျကလဲ နညျးပညာ သမား မဟုတျတာ ပါမယျ ထငျပါရဲ့။ ဒီလိုနရေငျး နာရီ အတနျကွာတဲ့ အခါမှာတော့... ကြုပျ ကှနျပြူတာ ထဲကို ကံအားလြျောစှာ ဆော့ဖျဝဲ သှငျးလို့ အဆငျပွသှေားခဲ့တယျ။
ဒီလိုနဲ့ ဝငျရောကျသှားတဲ့အခါ ကြုပျ ပထမဆုံး တှတေဲ့ ဟာက အမှောငျ ဝီကီပိဒိယ အထဲကို ဝငျတဲ့ ဖတျလို့ မဖွဈနိုငျတဲ့ လငျ့ချ အရှညျကွီး တဈခုပဲ ဖွဈတယျ။
ခငျဗြားတို့ အနနေဲ့ ဒီကိစ်စတှကေို ကွားဖူးနကွေ ဖွဈလိမျ့မယျ။ ကိုယျနှိပျတဲ့ လငျ့ချတှကေို ဂရုစိုကျပါ ဆိုတဲ့ သတိပေးသံ တှေ အပွငျ လောက ကှနျယကျတှေ မှာ တှေ့ မွငျဖူး ကွလိမျ့မယျ။ ရာနှုနျးပွညျ့ မှနျတယျ။ ဒီလငျ့ချတှရေဲ့ သယျဆောငျရာ ဒသေမှာ ကြုပျ ရောကျနေ ခဲ့တဲ့အခါ မွငျမကောငျး ရှုမကောငျး လောကျအောငျ အနိဋ်ဌာရုံ တှေ ခညျြ့ အပွညျ့ မွငျတှနေ့ရေတယျ။ ဒီလောကျရှောငျနေ တိမျးနတေဲ့ ကွားကမှ တခြို့ အကွောငျးအရာတှေ ဆောငျးပါး လေးတှကေို မကျြစိ က ရောကျဖွဈ အောငျ ရောကျလိုကျသေးတယျ။
ဘယျသူ တဈဦးတဈယောကျမှ မကွညျ့သငျ့တဲ့ အရာတှေ။ ရှံဖို့ ကောငျး ပွီးတော့ မိစ်ဆာနတျဆိုးတို့နဲ့ အလားသဏ်ဍာနျ တူတယျ။ ကြုပျ ဒီ မွအေောကျ ကှနျယကျမှာ ဖတျနတော အစပိုငျးပဲ ရှိသေးတယျ။ ဆယျမိနဈလောကျလဲ ကွာရော.. အိမျရှမှေ့ာ FBI က ရဲတှေ ရောကျ နမှော အလှနျအမငျး ကွောကျ လနျ့ မိနပွေီ။ ကြုပျရဲ့ စပျစုတဲ့ ပွဈမှု အတှကျပေါ့။
ကွောငျလှပါလားလို့ ခငျဗြားတို့ ထငျကောငျးထငျမယျမှနျး ကြုပျ သိ တယျ။ ဒါပမေယျ့ မွအေောကျ ကှနျယကျရဲ့ သဘာဝ ကိုက မူးယဈ ဆေးသုံးနတေဲ့ လူတဈယောကျနဲ့ အလားသဏ်ဍာနျ တူနတေယျ။ အခြိနျ တိုငျး ခငျဗြား တုနျလှုပျခွောကျခွားနပွေီးတော့ ငါ့ လုပျရပျက မှနျရဲ့လား... တရားရော ဝငျရဲ့လား ဆိုတဲ့ ဒှိဟအတှေး ခငျဗြားဆီမှာ ဖွဈပျေါလို့ နတေယျ။
"ငရဲ" တဲ့။ သူငယျခငျြးအခြို့ကို ကြုပျအဖွဈအပကျြ ပွောပွတဲ့ အခါ သူတို့က အဲ့သလို သုံးသပျ ကွတယျ။ ဘယျလိုပဲ ဖွဈပါစေ စစသုံးခငျြး မှာတော့ ရဲတှေ အိမျရှရေ့ောကျနပေါပွီ ဆိုတဲ့ ခွောကျခွား စိတျကို ဘယျလိုမှ ဖြောကျပဈလို့ မရဘူး။
ဒီလိုနဲ့ ရကျ အနညျးငယျ ကွာတဲ့ အခါမှာ ကြုပျ နညျးနညျး စိတျဖိစီး တာ လြော့လာတယျ။ ကိုယျ့ကို ကိုယျ လဲ ယုံကွညျခကျြရှိလာတယျ။ မွအေောကျ ဝီကီပိဒိယ ကနေ စှနျ့စားပွီး ထှကျခှာလို့ ကှနျယကျ အနှံ့ လြှောကျကွညျ့ ခငျြလာတယျ။ ဒီလိုနဲ့ လငျ့ချလေး တှေ ဟိုတဈစ ဒီတဈစ သတိလေးနဲ့ နှိပျ လို့ လြှောကျကွညျ့မိတယျ။
ဓာတျခှဲ စမျးသပျဖို့ လူငှား ကွျောငွာ တှေ၊ ကွေးစားလူသတျသမား ငှားရမျး လိုသူ တှရေဲ့ ကွျောငွာ တှေ၊ ငှမေဲစြေးကှကျတှေ... ရှေးဟောငျး ပစ်စညျး လဲလှယျ ရောငျးဝယျ သူတှေ စသဖွငျ့ ခငျဗြားတို့ ကြုပျတို့ နစေ့ဉျ တှနေ့ေုကြ သတငျးအခကျြ အလကျတှေ မဟုတျတဲ့ ခပျကွောငျကွောငျ ဝကျဘျဆိုကျ တှေ တဈခု ပွီးတဈခု ကလြာခဲ့တယျ။
ယုံရခကျခကျ တှေ။ ဘာနဲ့ အလားသဏ်ဍာနျ တူသလဲ ဆိုတော့ ပုံမှနျလိုငျးပျေါမှာ မွငျတှနေ့ကွေ ဆာဗေး လုပျခိုငျးနတေဲ့ ဝကျဘျ ဆိုကျ တှလေိုပဲ။ ကှာခွားခကျြက ဒီ မွအေောကျကှနျယကျ မှာ ဆာဗေး မရှိဘူး။
ကြုပျ မွအေောကျကှနျယကျမှာ ကငျြလညျခဲ့တဲ့ တလြှောကျ ညဈညမျး ဝကျဘျဆိုကျတှကေို ရှောငျ တယျ။ အလှနျ သေးသိမျတဲ့ စိတျဓာတျနဲ့ ကလေးမုဒိနျး အခှတှေေ ရောငျးဝယျ ဖောကျကားနတေဲ့ နရောတှပေဲ။ ဒါ့ကွောငျ့ ကလေးညဈညမျးအခှတှေေ လိုငျးပျေါမှာ မရှိလဲ ဒီကိစ်စ စိတျဝငျစားသူတှေ အနနေဲ့ မွအေောကျကှနျယကျမှာ အရငျကထဲက လှုပျရှား ရှာဖှနေမှေနျး တှေးမိလာခဲ့တယျ။
ပှငျ့ပှငျ့လငျးလငျး ဝနျခံရရငျတော့ တဈခှလေားပဲ.. ဖှငျ့ကွညျ့ မိတယျ။ စပျစုမိတာပါ။ မအနျမိရုံ တမယျပဲ လူက။ ဒါနဲ့ မွနျမွနျ ပွနျထှကျခဲ့ ရတယျ။ (မှတျခကျြ။ လုံးဝ မစမျးပါနှငျ့။)
ဒီလို လြှောကျကွညျ့ရငျး ထူးခွားတဲ့ ဖိုရမျလေး တဈခုကို သတိပွု မိတယျ။ ဖိုရမျနာမညျက "အိမျတှငျး ပုနျး မိသားစုမြား" တဲ့။ ခွောကျခွားစရာလဲ ကောငျးသလို စူးစမျးလိုစိတျလဲ ရှိတာကွောငျ့ ကြုပျ ဒီ ဖိုရမျ အထဲကို ဝငျလာလိုကျတယျ။
ဝငျဝငျခငျြး နှုတျခှနျးဆကျစာမှာ ရေးထားပုံအရ.. ဒီဖိုရမျဟာ တကယျ တော့ အသငျးအဖှဲ့ တဈခု ဖွဈ တယျ။ ကမ္ဘာအနှံ့အပွားက ထူးဆနျး တဲ့ မိသားစုတှေ ဝငျရောကျ ဆှေးနှေးလရှေိ့တဲ့ ဖိုရမျ တဈခု ဖွဈ တယျ။ ဒါပမေယျ့ ထူးဆနျးတယျ ဆိုတာက သူတို့ဟာ အပွငျလုံးဝ မထှကျသူ တို့၊ ပတျဝနျးကငျြနဲ့ အဆကျအသှယျ တမငျ ဖွတျထားသူတို့ အဆငျ့ သာ ဖွဈပွီး ခငျဗြားတို့ လူသတျကားတှထေဲမှာ မွငျနေ သလိုမြိုး မိသားစု မဟုတျဘူး။
သုံးယောကျ တဈဖှဲ့ လေးယောကျ တဈဖှဲ့လို မိသားစုငယျ ကနေ ခွောကျယောကျ ခုနှဈယောကျအထိ ကွီးမားတဲ့ မိသားစုအထိ အဖှဲ့လိုကျ ဒီထဲမှာ သတငျးတှေ ဖလှယျ နကွေတယျ။ သူတို့ ကိုယျပိုငျ အသိုငျးအဝိုငျးနဲ့ ဆကျစပျတဲ့ ပုံလေးတှေ တငျထားတယျ။
သူတို့ဟာ အိမျထဲမှာ မနဘေူး။ အိမျကိုစှနျ့လို့ ဂိုထောငျ ထဲမှာ ဖွဈပါ စေ၊ မွအေောကျခနျးထဲမှာ ဖွဈပါစေ နလေရှေိ့ ကွပွီးတော့ ရိက်ခာ ထှကျဝယျသူနဲ့ လယျယာ စိုကျပြိုးသူတို့မှ အပ ကနျြလူမြား၊ ကလေး သူငယျမြားဟာ ၂၄ နာရီလုံး၊ တဈပတျလုံး၊ တဈလ လုံး၊ တဈနှဈလုံး၊ တဈသကျလုံးအထိ ဒီ မွအေောကျခနျး/ ဂိုထောငျ ထဲမှာ နသှေားမယျ့ လူတှလေို့ ယူဆ ရတာပဲ။
ဒီလိုလြှောကျကွညျ့နတေုနျး လူတဈယောကျကို ကြုပျသတိပွုမိတယျ။ ဒီဖိုရမျရဲ့ နာမညျကွီး တဈယောကျ ယောကျ ဖွဈမယျ ထငျတယျ။ ခေါငျးစဉျတိုငျးရဲ့ အောကျမှာ သူဝငျရောကျ ဆှေးနှေး ထားတာတှေ ရှိတယျ။
ဖိုရမျရဲ့ ဟိုးအသေးငယျဆုံး အစိတျအပိုငျးက လူမမွငျမိလောကျတဲ့ ဆှေးနှေးမှုမှာတောငျ ဒီလူ့ရဲ့ ပွောဆို ဆကျသှယျမှုကို အနညျးဆုံး တဈခှနျးတဈလေ တှနေို့ငျတယျ။ ဒါနဲ့ ဘာတှမြေား ပွောကွသလဲ ဆိုတာ သိခငျြတော့ နောကျထပျပွပါ ဆိုတဲ့ ခလုပျကို နှိပျလိုကျတဲ့ အခါ မနျဘာဝငျမှ ရမယျဆိုတဲ့ စာ ပျေါလာတယျ။
ကြုပျ သူတို့ အသေးစိတျ ဆှေးနှေး ပွောဆိုတာလေးတှကေို တကယျ သိခငျြ သလား လို့ ကိုယျ့ကိုယျ ကို မေးတယျ။ ဒီအခါမှာ သခြောတယျ။ ကြုပျတကယျ လိုလိုလားလား နဲ့ကို သိခငျြနခေဲ့ မိတယျ။ ဒီတော့ မနျဘာ ဝငျမယျ ပေါ့။ အရငျဆုံး ကိုယျ့ကို ဖြောကျပေးထားတဲ့ ဆော့ဖျဝဲ က ပုံမှနျ အလုပျလုပျ နသေလား စဈလိုကျတယျ။ အိုကပွေီ ဆိုတော့ ကြုပျ မနျဘာ ဝငျဖို့ မနျဘာ ပရဝုဏျထဲကို ဝငျတဲ့ လငျ့ချ ကို နှိပျလိုကျတယျ။
အခကျြအလကျ ဖွညျ့ပွီးတဲ့ အခါမှာ စာတဈကွောငျးကလြာတယျ။ "မနျဘာ အဟောငျး တဈယောကျနဲ့ စကားစမွညျပွောဆိုရနျ" တဲ့။ နညျးနညျးတော့ ထူးဆနျးသလို ဖွဈသှားခဲ့ပမေယျ့ အသိလဲ တဈယောကျ မှ မရှိတော့ စောစောက နာမညျကွီး ပုဂ်ဂိုလျဆီကို စာပို့ဖို့ ဆုံးဖွတျလိုကျတယျ။ စာက -
"မင်ျဂလာပါခငျဗြာ။ ကြုပျ အခုလို ခငျဗြားနဲ့ မခငျသေးခငျ ရုတျတရကျ စာပို့ အကူအညီတောငျးမိတဲ့ အတှကျ ဦးစှာ တောငျးပနျလိုပါတယျ။ အရငျဆုံး ကြုပျကိုယျကြုပျ မိတျဆကျ ပါရစေ။ ကြုပျနာမညျ ကတော့ xxxx ဖွဈပွီး xxxx တက်ကသိုလျမှာ စာတမျးတငျဖို့ လုပျနတေဲ့ ကြောငျးသား တဈယောကျ ဖွဈပါတယျ။ အခု တငျမယျ့ စာတမျးနဲ့ ပတျသကျပွီတော့ ခငျဗြားတို့ ဖိုရမျလေးကို သှားရောကျ လလေ့ာ ဖို့ မိတျဆှေ တဈယောကျက လမျးညှနျတဲ့ အတှကျကွောငျ့ ရောကျလာခဲ့ခွငျးဖွဈပါတယျ။ ခု မနျဘာ ဝငျဖို့ အခကျအခဲ ရှိနတေဲ့ အတှကျ ကူညီဖွရှေငျးပေးပါလို့ အကူအညီ တောငျးအပျ ပါတယျ ခငျဗြား။ တကယျလို့ မနျဘာဝငျပွီး သှားခဲ့ရငျလဲ ဖိုရမျထဲမှာ ကြုပျအနနေဲ့ သိလိုတာလေးတှေ မေးမွနျး လိုပါ တယျ ဆိုတာကို တဈဆကျထဲ ခှငျ့တောငျးလိုကျရပါတယျ။ ကြေးဇူးတငျ ပါတယျ။ ကောငျးသော နေ့ ဖွဈပါစေ မိတျဆှေ။"
ဟုတျပါတယျ။ ခငျဗြားတို့ မွငျသလိုပါပဲ။ ကြုပျ အနညျးငယျ လိမျလညျမိ လိုကျပါတယျ။ ဒါပမေယျ့လဲ အဲဒီအခြိနျတုနျးက ကြုပျ အတှေးမှာ ယုတ်တိရှိမယျ ထငျစခေငျြတာလားမသိဘူး။ အဲဒီလိုစိတျ ဖွဈလာတဲ့ အတှကျကွောငျ့ ရေးသားမိခဲ့ခွငျး ဖွဈတယျ။ ဒီလိုနဲ့ပဲ ဆှေးနှေးမှုတိုငျးမှာ တကျတကျကွှကွှ ပါဝငျ နကြေ ပုဂ်ဂိုလျဟာ ကြုပျစာကို ထူးဆနျးစှာ လဈလြူရှုနေ ခဲ့တယျ။ စာလုံးဝ မပွနျ။ တဈရကျ၊ နှဈရကျ ကနေ စောငျ့ရငျး စောငျ့ရငျးနဲ့ နှဈပတျလောကျကွာတဲ့ အခါ ကြုပျတောငျ မတေ့တေ့ေ့ ဖွဈလာတယျ။
ဒီလိုနဲ့ တဈလ မပွညျ့ တပွညျ့ အခြိနျ ညတဈညမှာတော့ ကြုပျ ပုံမှနျအတိုငျး မွအေောကျကှနျယကျ ထဲကို ဝငျလို့ ဖိုရမျ ဝကျဘျဆိုကျကို ရိုကျထညျ့ လိုကျတဲ့အခါ...
မရှိတော့...။ ဖိုရမျ တဈခုလုံး အစရှာမရအောငျ ပြောကျဆုံးသှားပွီ။ ကြုပျမြား ဝကျဘျဆိုကျ လငျ့ချ မှားရေးမိလို့လား။ မဟုတျသေးပါဘူး။ ကြုပျ ရေးတာမှနျတယျ။ ဒါဆို ဘယျရောကျသှားရတာလဲ။
ကြုပျ ပို့မိတဲ့ စာနဲ့ မြား ဆိုငျလမေလား။ ဒါမှမဟုတျ ဒီပုဂ်ဂိုလျက သှားမြား တိုငျလိုကျ လို့ ဖိုရမျ ပိုငျရှငျ ကွောကျလနျ့ပွီးတော့ ဖကျြလိုကျတာမြားလား။
ကြုပျ တှမေိ့သလောကျတော့ တရားမဝငျတာ တဈခုမှတော့ မရှိပါဘူး။ ဘာ့ကွောငျ့မြားခုလို ထူးဆနျး တဲ့ အပွုအမူနဲ့ တုံ့ပွနျလိုကျရတာလဲ။ ပွီးတော့ ကြုပျလိုမြိုး အခွား တဈစုံတဈယောကျကရော.. သူတို့ကို ကြုပျရေးတဲ့စာမြိုး ယခငျက မရေးကွဘူး တဲ့လား။ မဖွဈနိုငျတာ။
ကြုပျ အံ့သွစိတျနဲ့ မကနြေပျစိတျနဲ့ ရောယှကျလို့ မွအေောကျကှနျယကျ အနှံ့ အသေးစိတျကို လိုကျလံ ရှာဖှနေမေိတယျ။ ဒီလိုမြိုး နခေ့ငျြးညခငျြး အသငျးအဖှဲ့ကွီး တဈခုလုံးကို ဖြောကျပဈဖို့ဆိုတာ မဖွဈနိုငျ ဘူးလေ။ သူတို့ နာမညျပွောငျးတာ ဒါမှမဟုတျ အခွားတဈနရောရာမှာ လှို့ဝှကျစှာ ကကျြစား နတောပဲ ဖွဈရမယျ။
ရှာသာ ရှာနတော မတှေ့။ အခြို့ လငျ့ချတှမှော အိမျတှငျးပုနျးမိသားစု အကွောငျး ဖျောပွထားတာတှေ ရှိပမေယျ့ သူတို့ ကိုယျတိုငျ ဝငျရောကျ ဆှေးနှေး နတော မဟုတျ။ ရှာရငျးနဲ့ မော လာတယျ။ ငါရှာတာ မြား စောနလေို့လား။
ကြုပျ တဈပတျ လောကျ ထပျစောငျ့ပွီးတော့ ထပျဝငျ ရှာမယျလို့ တှေးလိုကျတယျ။ ဟုတျတယျလေ။ သူတို့သာ အသဈတဈခု တညျထောငျမယျ ဆိုရငျ အခု ရှာဖို့ဆိုတာ အခြိနျစောသေးတယျ။ ဒါ့ကွောငျ့ ကြုပျ တဈပတျ အခြိနျ ထပျပေးလိုကျတယျ။ ဒီတဈပတျထဲမှာ ကြုပျ အခွားသော အခကျြအလကျ တှကေို ဆကျလကျ ရှာဖှနေမေိတယျ။
တကယျတော့ မွအေောကျကှနျယကျဆိုတာ အဆုံးအစမဲ့တဲ့ သှေးကွောတှလေိုပဲ။ ဒီသှေးကွောကို စတငျခွခေမြိတဲ့ ပထမဆုံးနကေ့ထဲက ကြုပျ သိလိုကျတယျ။ ကြုပျ ဘယျတော့မှ ထပျပွီးတော့ ဂူဂဲလျ လောကျနဲ့ သုံးတာ မကနြေပျနိုငျတော့ဘူးလို့။
မွအေောကျကှနျယကျတှဟော တဈခုဖျောလေ နောကျတဈခု စိတျဝငျစားစရာ တှလေ့နေဲ့ အဆုံးအစ မရှိ စိတျဝငျစားစရာ အတိနဲ့ ပွီးနတေယျ။ ဒါ့ကွောငျ့ အကွောငျးတဈခုထဲမှာ ကြုပျ စိတျနှဈထားရတာကို ငွီးငှလေ့ာမိတယျ။
ကြုပျအတှကျ အသဈတှလေိုအပျတယျ။ စူးစမျးခငျြစိတျ ပွငျးထနျလာနိုငျတဲ့ အခကျြအလကျသဈ တှကေို လိုလား တယျ။ အိပျလို့မရနိုငျလောကျအောငျ ဖမျးဆှဲထားနိုငျတဲ့ ခွောကျခွားစရာ သတငျးတှေ ကြုပျငတျမှတျ လာတဲ့ အတှကျ ကြုပျ ဆကျလကျတူးဖျောမိတယျ။
ဒီလိုနဲ့ ညဈညမျးလငျ့ချတှကေလှဲလို့ စုံနိုငျသလောကျ စုံအောငျ ကြုပျဟာ ကှနျယကျထဲကို ဖွနျ့ကကျြနေ မိတယျ။ တဈနရောမှာတော့ လူ့အရပွေားနဲ့ လုပျထားတဲ့ လကျမှုပစ်စညျးလေးတှေ ရောငျးနတော တှေ့ ခဲ့ တယျ။ အတုထငျမိလိုကျ ပမေယျ့ တဈနရောမှာ လုပျပုံလုပျနညျး သငျပွတဲ့အခှတှေေ တှတေ့ော့မှ ကြုပျ အိပျခငျြစိတျတှေ ဘာတှေ ပွယျ သှား တယျ။
နောကျတဈနရောမှာ ကတြော့ ဆိုငျယနျနိုကျဆေးတောငျ့လေးတှနေဲ့ အခွား မူးယဈဆေး/ သနေတျ တှေ ရောငျးဝယျ လလေံပဈနတော တှတေ့ယျ။ အားလားလား... တကယျ့ကို အထူးအဆနျး တှေ ခညျြ့ပဲ။
ကြုပျ ဘာတောငျတှခေဲ့သလဲဆိုတော့ "သတျသခေနျး" ဆိုတဲ့ နာမညျနဲ့ ဝကျဘျဆိုကျ တဈခု တှမေိ့တယျ။ ဒီအထဲမှာတော့ youtube ထဲကလိုမြိုး ဗီဒီယိုတှေ အမြားအပွား တငျထားတယျ။ ထူးခွား တာက ကိုယျ့ကိုယျကို သတျသတေဲ့ ဗီဒီယိုတှေ။ သို့သျော အခှတှေဟော အမွညျးလောကျပဲ ပွထားပွီး ဆကျလကျကွညျ့လိုသူက ပိုကျဆံပေးမှ အဆုံးထိ ကွညျ့လို့ ရတယျ။
ရိုကျကူးသူတှကေ ပွငျပလောကမှာ ဗီဒီယို ထုတျလုပျသူတှလေိုမြိုးပဲ။ သူတို့ကို သတျသလေိုသူက သှားဆကျသှယျရတယျ။ ပွီးတော့ ကိုယျသခေငျြတဲ့ ပုံစံကို ပွောပွတယျ။ ဒီပုံစံကို သဘောကရြငျ လိုအပျတဲ့ပစ်စညျး အထောကျအပံ့ ဆကျတငျ အစအဆုံး ထုတျလုပျသူက စီစဉျပေးတယျ။ ပွီးတော့မှ သမေယျ့နမှေ့ာ စာခြုပျခြုပျ ရုပျရှငျရိုကျ ရဲရဲသေ။ ပွီးပွီ။
အဲဒီအထိ မထူးဆနျးသေးဘူးလို့ ပွောလို့ ရတယျ။ ကြုပျဝငျကွညျ့နတေဲ့ ရကျက ကငျြးပနတော "သတျသေ ပွိုငျပှဲ" တဲ့။ ဒီမှာကတြော့ သတျသေ လို သူ တှကေို ဖိတျချေါတယျ။ မကျြလုံးတှေ ဘာတှေ တောငျ ပွူးသှားတယျဗြို့။
ပွိုငျပှဲဝငျသူတှကေ ပိုကျဆံပေးပွီး ဝငျကွညျ့ရတယျ။ ကိုယျသစေေ ခငျြတဲ့ သူကို ဘာနဲ့ သခေိုငျး ခငျြ တယျ ဆိုတာကို နညျးစနဈရှေးပွီးတငျပွရတယျ။ အကောငျးဆုံး သေ နညျးကို စဉျးစားနိုငျတဲ့ သူက သသေူပိုငျဆိုငျတဲ့ တဈခုခုနဲ့ ဆုငှေ ရတယျ။ ကဲ.. မရူးသှပျလှနျးဘူးလား။
နောကျဆုံး အိပျမရတဲ့ ညတှေ တဈရကျပွီး တဈရကျ ဆကျလာခဲ့တာမှာ... ကြုပျစောငျ့နတေဲ့ အခြိနျ တဈပတျ ပွညျ့တဲ့နကေို့ ရောကျလာခဲ့တယျ။
ဒီတော့ ကြုပျလဲ ထုံးစံ အတိုငျး အိမျတှငျးပုနျး မိသားစုမြားကို ပွနျရှာကွညျ့တာပေါ့။ မထူးခွား။ တကယျ ကို ဖကျြသှားပွီ ထငျပါ့။ ဒါမှမဟုတျလဲ ဖွဈနိုငျခရြှေိတာ တဈခုက သူတို့ ဒီ့ထကျ ပိုနကျတဲ့ ကှနျယကျထဲ ကငျြလညျနပွေီ ထငျတယျ။
အဲ့ဒီညက ကြုပျ မွအေောကျ ကှနျယကျ အနှံ့ စိတျကွိုကျ ရှာဖှပွေီး လို့ မတှတေ့ော့ တဲ့အဆုံး လကျလြှော့ လိုကျတော့မယျလို့ ကွံတုနျးမှာ.... ဝကျဘျဆိုကျ လငျ့ချတဈခု ကှနျပြူတာ မကျြနှာပွငျ ပျေါကို တကျ လာတယျ။
နာမညျက "ဦးတညျရာမဲ့တဲ့လမျး" တဲ့။ ဒီတော့ ကြုပျလဲ ဘာရယျမဟုတျ.. စိတျထဲက နှိပျ ခငျြ လာတဲ့ အတှကျ ဝငျဖို့ နှိပျလိုကျတဲ့ အခါ ကြုပျ မကျြဝနျး အစုံဟာ ဝိုငျးစကျ သှားပါ တော့တယျ။
တှပွေီ့။ ဖိုရမျကို။ ဒါပမေယျ့... ဖိုရမျအနနေဲ့ မဟုတျတော့...။ ဝကျဘျဆိုကျ တဈခုဖွဈနပွေီ။ ဆှေးနှေးမှု တှေ တဈခု ဆို တဈခုမှ မရှိတော့။ ဒါတှအေစား မိသားစုပုံတှဟော အယျလျဘမျ တဈခုစီ ဖှဲ့လို့ နရော တကြ စုစညျးထားတယျ။ ပွတိုကျတဈခုထဲ ရောကျ သှား သလိုပေါ့။
ဓာတျပုံတှဟော သနျ့ရှငျးတဲ့ မွအေောကျခနျးလို အခနျးထဲမှာ ရိုကျထားတဲ့ ဓာတျပုံတှဖွေဈတယျ။ စိတ်တဇကား ဆနျတဲ့ အရောငျအသှေးတို့နဲ့ မှနျးခွယျထားတယျ။ ဒါပမေယျ့ သူတို့ ပြျောနကွေတယျ။ ကလေးတှကေလဲ ရယျမောလို့ လူကွီးတှေ ကလဲ ဝတျကောငျးစားလှတှနေဲ့။
ဝကျဘျဆိုကျ တဈခုလုံးကို သခြော လလေ့ာကွညျ့တော့မှ ဒီဝကျဘျဆိုကျဟာ ဘာနဲ့ အလားသဏ်ဍာနျ တူနသေလဲဆိုရငျ အိမျငှား ကွျောငွာတှလေိုပဲ။ သို့သျော အိမျ အစား မိသားစု ဖွဈနတောလေးတဈခုပဲ။
ဟုတျတယျ။ မိသားစု တှေ ကွျောငွာထားတာလို့ ပွောရမယျ။ သူတို့နဲ့ အတူနခေငျြတဲ့ လူကိုရှာနတေဲ့ ဝကျဘျဆိုကျ တဈခု ဖွဈတယျ။ ဒီမှာ ထူးခွားခကျြတဈခုရှိတယျ။ မိသားစု တဈခုမှာ အတူလာရောကျ နထေိုငျလိုသူ တှဟော ဒီမိသားစု ရဲ့ လိုအပျခကျြ ဝိသသေ လက်ခဏာတှေ ပါရှိရမှာ ဖွဈတယျ။ အတိအကကြို ညှနျးဆိုထားတဲ့ ဝိသသေ လက်ခဏာတှေ ဖွဈတယျ။
ဘယျလောကျတောငျ တိကသြလဲ ဆိုရငျ ဥပမာ - "လာ ရောကျ နထေိုငျလိုသူသညျ ကယျြကားသော မေးရိုးတို့ ရှိရမညျ။ ကြုပျတို့မိသားစု တဈခုလုံးမှာ မေးရိုးကယျြသောကွောငျ့ ဖွဈသညျ။" တို့...၊ "သငျ သညျ အရပျ ၅' ၁၀" တိတိရှိရမညျ" တို့....၊ ယုတျဆှအဆုံး "သငျ့တှငျ ကြှနျုပျတို့ကဲ့သို့ အသံသွဇာ ခမျးခမျးနားနား ရှိရမညျ" တို့ စသဖွငျ့ တိတိကကြကြို လိုအပျတဲ့သူကို ညှနျးဆိုထားတာဖွဈတယျ။
ဒီလိုနဲ့ ဖတျလာခဲ့ရငျး အောကျဆုံးနား အရောကျမှာ မှိနျပပြ လငျ့ချ ကလေးတဈခု ကို အမှတျမထငျ တှမေိ့လိုကျပွနျတယျ။ အမညျးရောငျ နောကျခံပျေါမှာ မီးခိုးရငျ့ရောငျ လငျ့ချလေး တဈခု။ နှိပျကွညျ့ လိုကျတဲ့ အခါမှာတော့ ကြုပျကို နောကျ စာမကျြနှာ တဈခုဆီကို ချေါဆောငျသှားတယျ။
"ဆှေးနှေးခနျး" တဲ့။ တှပွေီ့ ဖိုရမျကို။ ဒါပမေယျ့... စောစောက ဝကျဘျဆိုကျနဲ့ မတူတဲ့ အေးစိမျ့မှုကို ဒီအထဲမှာ ခံစားနေ ရတယျ။ လေးနကျမှု၊ ခါးသီးမှု၊ နာကငျြမှုတှနေဲ့ ဖိုရမျကို တနျဆာ ဆငျထားတယျ။ အဓိက ကှာခွားခကျြအနနေဲ့ဆိုရငျ စောစောက ဝကျဘျဆိုကျမှာ ဖိတျချေါလိုစိတျလေးက စာမကျြနှာ ပျေါမှာ ကိနျးဝပျနတေယျ။ လူကွီးတဈယောကျကို လာစလေိုတဲ့ အတှကျ မိသားစုက ဖိတျချေါတာမြိုး။
ဒီဖိုရမျကတော့ ထူးခွားတယျ။ ကြုပျ ကြောရိုးထဲ စိမျ့သှား လောကျ အောငျ ကွကျသီးမှေးညှငျးတှေ ထ သှားခဲ့တယျ။ ဒီဖိုရမျဟာ လူငယျ/ ကလေးတဈယောကျကို လိုအပျတဲ့ မိသားစု တှေ တှဆေုံ့ပွီး ကလေးလဲလှယျ တဲ့ နရောဖွဈတယျ။ ဆှေးနှေးမှုတှေ ရှိတယျ။ ကလေးသဈ တဈယောကျကို ကွိုဆို နညျး ကွိုဆိုဟနျကို သငျပွမှုတှလေညျး ရှိ တယျ။ လဲလှယျ သူခငျြး ကတိကဝတျတှေ ရေးသား ထား တယျ။ ဒီမှာကြုပျ ပွဿနာမြား ဆိုတဲ့ ကဏ်ဍကို အထူးသတိပွု မိခဲ့တယျ။
ဒီအထဲဝငျကွညျ့လိုကျတဲ့အခါမှာတော့... ကဏ်ဍခေါငျးစဉျ အောကျမှာ ရှိတဲ့ ဒုတိယမွောကျ sticky post ကို စိတျဝငျစား မိတယျ။ ဆှေးနှေးနတေဲ့ အကွောငျးအရာက "တတိယခြာတိတျ အတုဖွဈနခွေငျး" တဲ့။ ပို့ဈပိုငျရှငျက အမြိုးသမီး။ အိမျထောငျမရှိ။ သူမ အနနေဲ့ ရှမှေ့ာ ကလေးနှဈယောကျကို ဒီဖိုရမျကနပေဲ ရှာဖှယေူခဲ့တာ ဖွဈပွီး ဒီနှဈယောကျက အစစ အရာရာ အဆငျပွတေယျ။ ဒါပမေယျ့ တတိယ တဈယောကျ လောကျ ယူဦးမယျဆိုပွီးတော့ ထပျယူခဲ့တဲ့အခါမှာ အဆငျမပွဘေူးလို့ ဆိုတယျ။
သူပွောပုံအရတော့ ကလေးဟာ တဈပတျရဈကလေး ဖွဈပွီး တော့ သူမ အရှမှေ့ာ မိသားစု တဈစုက စတငျချေါယူ ခဲ့ဖူးတယျ။ "အရမျးငိုလှနျးတဲ့အတှကျ" ဆိုတဲ့ အကွောငျးပွခကျြ နဲ့ ဒီမိသားစုဟာ သူမ လကျထဲကို လာထညျ့ခဲ့တဲ့ အခါမှာ သူမရဲ့ လိုအပျခကျြ တဈခုဖွဈတဲ့ ဆံပငျ အမညျးရောငျ ကလေးမှာ မရှိ။ ဒီတော့ ကလေးကို ဆံပငျ အမညျးဆိုးပေးပွီးတော့ သူမဆီကို လာပေးသှားတာပဲ။
စာဖတျသူ ခငျဗြားတို့တော့မသိ။ မကျြမွငျဖတျနရေတဲ့ ကြုပျအတှကျ တောငျ ဒါ လုံးဝ အဓိပ်ပာယျမရှိတဲ့ စကားတှပေဲ။ သို့သျော.. ဖိုရမျတဈခုလုံး နီးပါးက လူတှဟော သူမရဲ့ ခေါငျးစဉျ အောကျမှာ စုစညျးလို့ သူမကို လာနှဈသိမျ့နခေဲ့တယျ။ သူမရဲ့ အခကျအခဲကို ဘယျလို နားလညျကွောငျး တဈယောကျ က ပွောတယျ။ နောကျတဈယောကျက သူလဲ ထပျတူ ဖွဈရပျ မြိုး ဖွဈဖူးတယျလို့ဆိုတယျ။ "အရိုးမာတယျ ဆိုတဲ့ ကလေး တူတူဆော့နရေငျးနဲ့ တဈရကျတောငျ မကွာဘူး၊ အရိုး ကြိုးသှားတယျ။"တဲ့။ ဒီ ဒုတိယ ပုဂ်ဂိုလျကဆိုတယျ။
ဖတျရငျးဖတျရငျးနဲ့ ဝကျဘျဆိုကျမှာရော ဖိုရမျမှာရော သူတို့ရဲ့ ဝိသသေ သတျမှတျခကျြတှေ ထားရှိ ရခွငျးရဲ့ အကွောငျးအရငျး ကို ကြုပျနားလညျလာ ခဲ့တယျ။ အကယျ၍သာ ပတျဝနျးကငျြ က တှရှေိ့ ခဲ့မယျ ဆိုရငျ ကွညျ့လိုကျတာနဲ့ ဒီမိသားစုဟာ အမြိုး တျောစပျပါတယျ လို့ ပွောလို့ရအောငျ သူတို့နဲ့ ပုံသဏ်ဍာနျ အတူဆုံး ကလေးတှေ/ လူကွီးတှကေို စနဈတကြ တိတိကကြ ရှာနခေဲ့တာပဲ။
အဲ့သညျ အကွောငျးကွောငျ့ အခု လိုအပျခကျြကို လိမျပွီး ထား သှားခဲ့တဲ့ ကလေးကို အမြိုးသမီးအနနေဲ့ ဘယျလိုမှ ဆကျထားဖို့ မဖွဈနိုငျတော့တာပဲ။ ဒါ့ကွောငျ့ သူမအနနေဲ့ နောကျထပျ ဒီကလေးကို ချေါလို သူ ရှိလမေလားလို့ လာရောကျ ရှာဖှခွေငျး ဖွဈတယျ။ ဖိုရမျတဈခုလုံးက လူတှဟော သူမကိုတော့ သနား သျောလညျး အရမျးငိုပွီးတော့ ဆံပငျ အနကျ မဟုတျတဲ့ ကလေးကို မချေါလိုကွဘူး။ ဒီအခါမှာ အမြိုးသမီးက နောကျဆုံး တော့ ရကျသတျမှတျခကျြ တဈခု ထုတျပွနျ ထားတာ ကို ကြုပျဖတျလိုကျ ရတယျ။
"သွဂုတျ ၃ ရကျနမှေ့ သူ့ကို ယူမယျ့လူမပျေါခဲ့ရငျတော့.. မတတျနိုငျ ဘူးရှငျ.. ကြှနျမ လုပျထုံးအတိုငျး စီရငျ ရတော့မှာ ပေါ့။"
ဒီကနဟေ့ာ သွဂုတျ ၁ ရကျနေ့။ လူအခြို့က သူမ စကားကို အကွောငျးပွနျထားတယျ။ တဈယောကျက - "အိုး.. သနား စရာ ကလေးပါလား.. ဒါပမေယျ့ ဘယျတတျနိုငျမလဲ.. မိနျးကလေး ဘကျက တရား သဖွငျ့ စီရငျ တာပဲ။ အားပေးတယျ။ ခြ" တဲ့။ နောကျတဈယောကျကလညျး - "ကောငျးတယျ ညီမ။ ကိုယျစိတျခမျြးသာဖို့ အရေးအကွီးဆုံးပါ။" တဲ့။ ဘယျတဈဦး တဈယောကျကမှ ကလေးငယျ ဘကျ ကနေ ပွီးတော့ ရပျတညျပေးမယျ၊ စာနာပေးတယျဆိုတာ မတှရေ့ဘူး။ ယူမယျ့လူလညျး တဈယောကျ မှ မပျေါလာ ခဲ့ဘူး။
ဒါ့ကွောငျ့ ကြုပျ ဘဝမှာ လုံးဝ မလုပျသငျ့တဲ့ ကိစ်စ တဈခုကို ကြုပျ ပထမဆုံးနဲ့ နောကျဆုံး အကွိမျ လုပျ ခဲ့မိတယျ။ "ကြုပျ ကလေးကို ယူမယျ။ ဆကျသှယျပါ။" ဆိုတဲ့ စာတိုလေး တဈစောငျ ဒီအမြိုးသမီး ဆီ ကို စာပို့လိုကျခွငျးပဲ ဖွဈတယျ။ ကြုပျအနနေဲ့ ပွနျစာကို သိပျတော့ မမြှျောလငျ့နခေဲ့ပါဘူး။ ပထမ တဈခေါကျ တုနျးကလို ဖိုရမျကွီး တဈခုလုံး အစဖြောကျပွီးတော့ ထှကျပွေး တော့မယျပဲ ထငျခဲ့မိတယျ။ ကြုပျ တကျတကျစငျ အောငျ လှဲသှားပါတယျ။ ၁၅ မိနဈတောငျ မရှိလိုကျသေးခငျ အခြိနျမှာ အမြိုးသမီး ဆီက ပွနျစာ ရောကျလာတယျ။
"ကြေးဇူးကွီး ပါပရှေ့ငျ။ ကြှနျမတော့ဖွငျ့ လုပျထုံးအတိုငျး စီရငျ ရတော့မယျ ထငျနမေိတာ။ ပွီးတော့ အိမျက အကွီးနှဈကောငျ က ဒါမြိုးစီရငျတာ တဈခါမှ မတှဖေူ့းတော့ သူတို့ရှမှေ့ာ လုပျဖို့ လဲ ကြှနျမ ကွောကျရှံ့နခေဲ့မိတာ။ ရှငျ ကယျပလေို့ပေါ့။ ကောငျး ပါပွီရှငျ။ ဒါနဲ့ ရှငျ့ မိသားစု အကွောငျး မိတျဆကျ ပါဦး။ ဘာရယျ တော့မဟုတျပါဘူး။ လဲလှယျသူတှရေဲ့ ကတိကဝတျ အရပါ။ ရှငျလဲသိမှာပါ။"
ဒါနဲ့ ကြုပျလဲ လိမျလညျပွီးတော့ လိုတိုရှငျးလေးနဲ့ စာပွနျ ရ တာပေါ့။ "အိမျထောငျရှငျပါ။ သမီး တဈယောကျရှိပါတယျ။ ဆံပငျအနကျပါ။ ပုံထဲက ကောငျလေးဆိုရငျ သမီးကို မောငျလေး တျောခငျြ လားလို့ သူ့ကို မေးတော့ သမီးက လိုခငျြကွောငျးပွောတာနဲ့ ခုလို စာပို့ လိုကျ ရခွငျး ဖွဈပါတယျ။"
ဒီနောကျတော့ ကြုပျနဲ့ အမြိုးသမီးနဲ့ဟာ သူ့ဆီက လာရောကျ ချေါဆောငျရမယျ့ နရောရယျ အခြိနျရယျ ဝတျလာရမယျ့ အင်ျကြီ အရောငျရယျ စသဖွငျ့ အသေးစိတျ အခြိနျးအခကျြ လုပျထား လိုကျပါတယျ။
ဒီ့နောကျ ကြုပျ စားပှဲပျေါမှာ ထိုငျရငျး စဉျးစားတယျ။ အခုမှ အသိပွနျဝငျလာတဲ့ လူတဈယောကျလို "ဟာ..! ငါ ဘာတှေ မြားလုပျခဲ့လိုကျတာလဲ။ အသိဉာဏျ ကငျးမဲ့ လှခညျြလား။" ပေါ့။
အခုတော့ အားလုံး ကြှံသှားခဲ့ပွီ။ နောကျပွနျဆုတျဖို့ မဖွဈနိုငျ တော့ဘူး။ ဒါဆို ဘာလုပျရမလဲ။ ငါ ရဲ ချေါ သငျ့လား။ ငါ ရဲတှကေို ဒီကိစ်စပွောလိုကျတဲ့ အခါ ဒီ မွအေောကျ ကှနျယကျ အထဲမှာ ခွရှေုပျခဲ့တဲ့ ငါ့အပျေါရော တရားဥပဒကေ ခှငျ့လှတျ မှာလား။ လူစှမျးကောငျး လုပျပွီးတော့ ကလေးတဈယောကျကို ကယျတငျမိတဲ့ ဆုလာဘျက ထောငျဒဏျ ဖွဈသငျ့သလား။
ကြုပျ ကွောကျလနျ့ နမေိပါပွီ။ အလှနျအမငျးကို တုနျလှုပျ ကွောကျလနျ့နမေိပွီ ဖွဈပါတယျ။ တဈစုံ တဈယောကျက ကြုပျမှနျးသိသှားမှာကို ကွောကျနတေယျ။ သိသှားတဲ့အခါ သတငျးတှကေ နိုငျငံကြျော ရုံမက ကမ္ဘာပါကြျောပွီး ထောငျ ကမြယျ့ ကိနျးပါ။
ကမ္ဘာ အနှံ့ကလူတှကေ ကြုပျကို ပွောလိမျ့မယျ။ "ဒီကောငျလား... လူ့အန်ဓပါကှာ။ ကလေးတဈယောကျ ရဲ့ အသကျကို တော့ ကယျပါရဲ့။ ဒါပမေယျ့ ဒီ ကယျတငျမှု မတိုငျခငျ ဒီ ကောငျ မွအေောကျ ကှနျယကျ ထဲ ဘာတှလေုပျခဲ့လဲ။ ဒုစရိုကျသမား လား။ မုဒိနျးသမားလား။ ကွေးစားလူသတျ သမားလား။ ဘယျသူကမှ မသိနိုငျပဲ။"
ဒီ အတှေးတှနေဲ့ ကြုပျ စိတျ ပိုပွီးတော့ ဖိစီး လာခဲ့တယျ။ ကြုပျ ဘာလုပျ သငျ့သလဲ။ ကလေး တဈယောကျ ကို ကယျပွီးတော့ တဈကမ္ဘာလုံးက အရှကျတှေ သိမျးပိုကျလို့ ထောငျထဲကို သှားမလား။ ဒါမှမဟုတျ ကလေးရဲ့ ကံကွမ်မာကို ဒီအတိုငျး လှတျ ထားလို့ ဒီကိစ်စ ဘာမှ မဖွဈခဲ့သလိုပဲ ကြုပျနသှေား သငျ့မလား။
ရဒေီယိုမှ သတငျးကွငွောသံ ပြံ့လှငျ့နသေညျ။
"ကနျြးမာတျော မူကွပါစရှငျ။ ဒီကနညေ့ အထူး သတငျးအနနေဲ့ တငျပွဖို့ ရှိတာကတော့ "ဆငျခွဖေုနျး ရပျကှကျမှာ လေးနှဈသား ကလေးငယျ အလောငျးတဈလောငျး ရှာဖှတှေရှေိ့မှု" ဖွဈပါ တယျရှငျ။ အခငျး ဖွဈပှားပုံကို တှမျကနပွေီး ပွောပွ ပါလိမျ့မယျရှငျ့။"
တှမျ - "ကြေးဇူးပါ ဘသျရေ။ ရဲစခနျးက အတညျပွုခကျြအရ ဒီကလေးငယျဟာ လှနျခဲ့တဲ့ ၂နှဈ လောကျတုနျးက နေ့ ကလေးထိနျး ကြောငျးကနေ ပြောကျဆုံးသှားခဲ့တဲ့ ကလေး ဖွဈပါတယျ ခငျဗြာ။ ဒီအမှုဟောငျးနဲ့ ပတျသကျ ပွီးတော့ ကလေးထိနျးကြောငျး ပိတျခဲ့ရပွီး ကလေးခိုးဂိုဏျးနဲ့ ပတျသကျ လို့ အစိုးရပိုငျးမှ တျောတျော ဂယကျ ရိုကျခဲ့ဖူးတာကို မိဘ ပွညျသူမြား ကွားမိကွ လိမျ့မယျ ထငျပါတယျ။ ကလေးငယျ အလောငျးမတှမေီ့ လှနျခဲ့တဲ့ ရကျ အနညျးငယျကတော့ ရိုဆနျဒေးလျ ရဲစခနျးကို လူ တဈယောကျ ဒီကိစ်စနဲ့ ပတျသကျ ပွီးတော့ သတငျးပို့တယျ လို့လဲ ရဲစခနျးက ဖှငျ့ပွောခကျြ အရ သိရှိရ ပါတယျ။ အခု ကြှနျတျောတို့ သတငျးဌာနမှာ ဒီစကားပွော အခှလေေး ရှိနပေါတယျ။ မိဘ ပွညျသူမြား နားဆငျကွညျ့ကွဖို့ ဖှငျ့ပွလိုကျ ရပါတယျ ခငျဗြား။"
၉၁၁ ဖုနျးကိုငျ အျောပရတော - "နိုငျးဝမျးဝမျးကပါ။ ဘာကိစ်စလဲ။"
အမညျမသိ ချေါဆိုသူ - "ကလေးတဈယောကျအသကျခံရတော့မယျ ကြုပျထငျတယျ ဆရာရေ!"
၉၁၁ ဖုနျးကိုငျ အျောပရတော - "ဘာ..? ဘယျလို?! အခု ဘယျက ချေါနတောလဲမသိဘူး။"
အမညျမသိ ချေါဆိုသူ - "ဟာ.. ဒါတော့..ပွောလို့မရဘူး ဆရာကွီး။ မရဘူး မရဘူး။ လုံးဝမရဘူး။ ကြုပျပွောတာသာ နားထောငျစမျးပါ။ ဒီလိုဗြ... ကြုပျ အငျတာနကျကနေ ဝကျဘျဆိုကျတဈခု တှတေ့ယျ။"
၉၁၁ ဖုနျးကိုငျ အျောပရတော - "ဘာဝကျဘျဆိုကျလဲ။"
အမညျမသိ ချေါဆိုသူ - "ဟာဗြာ..ဝကျဘျဆိုကျပါဆို။ ဝကျဘျဆိုကျပေါ့။ မွအေောကျဗြာ။ အိမျတှငျးပုနျး တှလေဗြော။ အိမျတှငျးပုနျး မိသားစုတှေ စုဝေးတဲ့ ဝကျဘျဆိုကျဗြာ။ ပွီးတော့ သူတို့ ကလေး တှေ ခိုးတယျ သိလား။ ပွီးတော့ ကြုပျပွော.."
၉၁၁ ဖုနျးကိုငျ အျောပရတော - "နောငျကွီး.. စိတျကို ငွိမျငွိမျထား ပွီးပွောပါ။ တဈခုခငျြးစီ ရှငျးအောငျ ပွော။ ဒီ ဝကျဘျဆိုကျရဲ့ လိပျစာက ဘာလဲ။ ပွီးတော့ ခငျဗြား အခု ဘယျကနေ ဖုနျးဆကျနသေလဲ။"
အမညျမသိ ချေါဆိုသူ - "ဟဆေ့ရာကွီး! ခငျဗြားအရဈရှညျနတောနဲ့ ဟိုကောငျမ က ကလေးကို *ပွတျတောငျးပွတျတောငျး ဖွဈသှားသညျ* ။ ကလေးက ပွနျပေးဆှဲခံခဲ့ရတာဗြ။ သူမ ကိုယျတိုငျ ပွနျပေးဆှဲလာတာ။ ခငျဗြားတို့နောကျကနြရေငျ ကလေးတော့ အသတျခံရတော့မှာပဲဗြာ! လာခဲ့ လာခဲ့။ လိပျစာက xxxxx xxxxx xxxxx မှာပဲ။ ၅ နာရီ မတိုငျခငျ လာပေးပါ ဆရာကွီးတို့!"
၉၁၁ ဖုနျးကိုငျ အျောပရတော - "ဟယျလို ဟလေူ့ နဦေးလေ။ ဟယျလို...ဟာ!"
တှမျ - "ဆကျလကျ စုံစမျးခကျြမြားအရ ဒီကလေးငယျဟာ ကလေးခိုးဂိုဏျးတှရေဲ့ လကျခကျြမိခဲ့တဲ့ ကလေးတဈဦး ဖွဈနိုငျ နတောမို့ ရဲအရာရှိကွီး xxxx အပါအဝငျ ရဲတပျဖှဲ့ဝငျ မြားဟာ သတငျးရတဲ့ နရောကို ၅ နာရီ မတိုငျမီ သှားရောကျ ရှာဖှခေဲ့ပါတယျ။ အခငျးဖွဈပှားခွငျး တဈစုံတဈရာ မရှိတဲ့ အတှကျ ပွနျလာခဲ့ပွီး သခြောအောငျ နောကျတဈနေ့ ဖွဈတဲ့ သွဂုတျလ ၃ ရကျနမှေ့ာ ထပျမံ သှား ရောကျ ရှာဖှရောမှာ ကလေးအလောငျးကို တှရှေိ့ခဲ့ရခွငျး ဖွဈပါတယျ။ မှုခငျး ဆရာဝနျရဲ့ ဆေးစဈခကျြ အရ ကလေးဟာ လညျပငျးညှဈ အသတျခံခဲ့ရတာဖွဈပွီးတော့ ကြူးလှနျသူရဲ့ ဒီအနျအေ လကျဗှရော ဆံပငျ စသဖွငျ့ သဲလှနျစ တဈခုမှ မကနျြအောငျ သသေသေပျသပျ သတျသှားခဲ့ခွငျးဖွဈပါတယျ။ ဒီ အမညျမသိပုဂ်ဂိုလျ ချေါဆိုခဲ့တဲ့ ဖုနျးဟာ လညျး အလောငျး တှခေဲ့တဲ့ အနားက လမျးဘေးဖုနျး မှ ဖွဈတဲ့ အတှကျ သတငျး ပေးသူ ဟာလဲ ဒီကလေးခိုးဂိုဏျးနဲ့ တနညျး တဖုံ ပတျသကျ ဆကျနှယျ နမေယျလို့ ရဲအရာရှိမြားက သုံးသပျထားပါတယျ။ နောကျဆုံး သတငျးမြားအရ အခု အရာရှိတှဟော ကလေး ငယျ ပြောကျဆုံးနခေဲ့တဲ့ ၂ နှဈလုံး ဘယျရောကျနတေယျ ဆိုတာကို ဆကျလကျစုံစမျး ထောကျလှမျး နပေါ တယျ ဆိုတာကို ကြှနျတျောတို့ သတငျးဌာနက ဆကျသှယျ မေးမွနျးရာ ဖွကွေား ပေးခဲ့ပါတယျ ဘသျရေ။"
ဘသျ - "ဟုတျကဲ့ပါရှငျ။ ကြေးဇူးပါ တှမျရေ။ ဒါ အလှနျ ဝမျးနညျးစရာ သတငျးပါပဲရှငျ။ ခု တဈခါ နောကျထပျ ဖျောပွပေးမယျ့ သတငျးကတော့... xxxx"
ref: Underground Families ကို မှတျစုကွမျး မှ ဘာသာပွနျဆိုသညျ။ ‪#‎kyawnge‬